ဒီကနေ့ ကြှနျတျောရောကျနတေဲ့ အာဖဂနျနစ်စတနျ – Kyaw Zaw Oo's Blog
December 19, 2009 November 25, 2021 kyaw zaw oo
ဒီကနေ့ ကြှနျတျောရောကျနတေဲ့ အာဖဂနျနစ်စတနျ
[ Zawgyi version here ] [ Unicode version below ]
ဒီကနေ့ ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်
(ဒီဆောင်းပါးကို ကျော်ဇောဦး အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေခဲ့စဉ်ကာလက ရေးသားခဲ့တယ်။ ၂၀၀၉ နှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ ဒီဆောင်းပါးကို အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲပြီး မြန်မာတိုင်းမ်က ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြခဲ့တယ်။)
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘိန်းအများဆုံး ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံကို ကျွန်တော် ရောက်နေတာ နှစ်လကျော်သုံးလလောက်ရှိပါပြီ။ ဘိန်းကရတဲ့ ၀င်ငွေတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးအာဏာကို ပိုမို ခိုင်မာ အောင် လုပ်တတ်ကြတဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်။ ဘိန်းဝင်ငွေအားဖြင့် နောက်ခံလက်နက်ကိုင်တပ် တွေကို ပိုမိုအားကောင်းအောင် တည်ဆောက်ကြတတ်တဲ့ စစ်ဘုရင်တွေရှိရာ အာဖဂန် နစ္စတန် ပေါ့ . . . ။
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလထဲမှာ ကဘူးလ်မြို့တော်ကို အစ်ဒ် ပွဲတော် အားလပ်ရက် ခြေက်ရက်လောက် သွားနားနေခဲ့တာကလွဲရင် အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံး မြို့ဖြစ်တဲ့ ကန်ဒါဟာမှာ ကျွန်တော်နေရတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး အသေးစိတ်ကျကျ ပြောရရင် ကန်ဒါဟာမြို့နဲ့ ကန်ဒါဟာ လေဆိပ်ကြား တစ်နေရာက စခန်းဝင်းကြီးတစ်ခုထဲမှာ ကျွန်တော်နေပါတယ်။
ပရိဘောဂ အသုံးအဆောင် အပြည့်အစုံတပ်ဆင်ထားတဲ့ ကွန်တိန်နာအိမ် (conex) တစ်လုံးထဲမှာ ကျွန်တော်နေပါတယ်။ (အဲသည် ကွန်တိန်နာအိမ်တစ်လုံးရဲ့ တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ ၉၈၀၀ ဆိုပဲ . . . ။) ကျွန်တော့် conex နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ဗုံးဘန်ကာတစ်ခုရှိတယ်။ ဘန်ကာရဲ့ အပေါ်နားလောက်မှာ အရေးပေါ်ဥသြတစ်ခု ချိတ်ထားတယ်။
ကျွန်တော့် အခန်းကနေ ခြေလှမ်းထွက်လိုက်ရင်ပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်ခွင်ကို ရောက်တယ်။ ဆိုလိုတာက အဲသည် အလုပ်ခွင်ထဲမှာပဲ ကျွန်တော် နေပါတယ်။ ဒီတော့ အလုပ်ခွင်ကနေ အိမ်ကို အသွားအပြန်လုပ်ရင်း ပြန်ပေးဆွဲခံရတာတို့၊ ပစ်သတ်ခံရတာတို့ မရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ အလုပ်ခွင်ကို ၀င်တိုက်တာတို့ . . . ၊ လောင်ချာနဲ့ လှမ်းပစ်တာတို့ မကြုံရရင်ပေါ့လေ။
အခန်းထဲက ကျွန်တော့် လက်ပ်တော့ပ် ကျွန်ပျူတာကို ၀ိုင်ယာလက် ကွန်နက်ရှင်းနဲ့ အင်တာနက်ချိတ်ထားတာ မို့လို့ ကျွန်တော့် ဂျီမေးလ်က အွန်လိုင်းပေါ်ကို ရောက်နေတတ်ပေမယ့် လူကိုယ်၌ကတော့ အခန်းပြင်က အလုပ်ခွင်မှာ ရောက်နေတတ်တာများပါတယ်။ ၀ိုင်ယာလက် ကွန်နက်ရှင်းက အလုပ်သိပ်မဖြစ်တော့ အရေးပေါ်ကျရင် ဂေါ်ရခါး လုံခြုံရေးတွေ ဘုံသုံးကြတဲ့ နေရာကို သွားပြီး အီးမေးလ် သွားပို့ရတတ်တယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ကဘူးလ်ကိုရောက်တယ်။ ကဘူးလ်မှာ နှစ်ရက် လောက်နေပြီး၊ ကန်ဒါဟာကို ဆက်သွားတယ်။ ကန်ဒါဟာမှာ နှစ်ရက်လောက် အိပ်ပြီးတာတောင် မနက် မျက်စိနှစ်လုံး ပွင့်တာနဲ့ ပထမဆုံးတွေးမိတာက ငါဘယ်မြို့ကို ရောက်နေပါလိမ့်ဆိုတဲ့ အတွေးပဲ။
ကန်ဒါဟာကို ကျွန်တော်ရောက်ပြီး ဒုတိယမြောက် ညနေခင်းမှာ နီးနီးနားနားက သေနတ်သံနှစ်ချက်ကြားရတယ်။ သိပ်မအေးလှတဲ့ စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်း တစ်ညနေ ၈နာရီလောက်မှာပေါ့။ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့ အထက်အရာရှိလည်းဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်သန်းထွဋ်ကပြောတယ်။ အခုနက သေနတ်သံ နှစ်ချက်ကြားလိုက် သလားတဲ့။
အာဖဂန်အရပ်သားနှစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့ အလုပ်စခန်းဝင်းနားကို ကပ်လာလို့ ရပ်ခိုင်းတာ မရပ်လို့ အစောင့်တွေက ပစ်လိုက်တာတဲ့။ ပစ်ရုံပဲ ပစ်တာလား၊ ပစ်သတ်လိုက်တာလား မသေချာပေမယ့် ပစ်တာတော့ သေချာတယ်။
အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာ ကင်းလှည့်နေကြတဲ့ နေတိုးစစ်ယာဉ်တန်းတွေကို ခင်ကြောင်းမင်ကြောင်းပြဖို့ မာကြောင်းသာကြောင်း စကားသွားပြောဖို့ အနားသွားကပ်လို့ မရပါဘူး။ မသင်္ကာရင် သူတို့ကတော့ ပစ်မှာပါပဲ။
အလုပ်နားတဲ့ အချိန်မှာ အခန်းထဲမှာထိုင်ပြီး တီဗွီချန်နယ် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းကြည့်တယ်။ စာလေး ဘာလေး ဖတ်တယ်။ ကားစီးရ၊ ခရီးသွားရတဲ့ အချိန်ကလွဲရင် အသက်ဘေးနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်း မှာပဲ နေရတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ကဘူးလ်ကိုရောက်တော့ ကျွန်တော့်အိတ်ထဲမှာ နှစ်ဒေါ်လာပဲ ကျန်တော့တယ်။ တကယ်တော့ နယူးဒေလီမှာ နှစ်ရက်နေပြီးတော့ ဟိုတယ်ခတွေ၊ ဟိုတယ်ကစီစဉ်ပေးတဲ့ ကားခတွေ အားလုံးရှင်းအပြီး အင်ဒီရာဂန္ဒီလေဆိပ်ကိုဆင်းလာတော့ အိတ်ထဲမှာ ၄၂ ဒေါ်လာကျန်သေးတယ်ဗျ။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်တော့ ပတ်စ်ပို့မှာ ဗီဇာအသစ်ပေမယ့်လို့ ခြစ်ရာကလေးပါနေတော့ လေဆိပ်က အန္ဒိယ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိက ပထမအဆင့် အနေနဲ့ စတင် ရစ်တယ်။ ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို လူတန်းကထွက်စေပြီး စောင့်ခိုင်းထားတယ်။ တတိယအဆင့်အနေနဲ့ လူရှင်းသွားတော့မှ ကျွန်တော်နဲ့ ဈေးစကားပြောတယ်။ ဒီလေယာဉ်ကို မစီးပဲ နယူးဒေလီမှာ ဆက်နေဖို့ကလည်း ပိုက်ဆံ မကျန်တော့ဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း တော်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်။ ဟေ့ . . . ငါ့မှာ ဒေါ်လာ ၄၀ ပဲပါတော့တယ်လို့ သူ့ကို ရှင်းပြရတယ်။ ဈေးတည့်သွားလို့ လေယာဉ်ပေါ်တက်ခွင့်ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အိတ်ထဲမှာကျန်တဲ့ နှစ်ဒေါ်လာနဲ့ ကဘူးလ်ကို ရောက်လာတယ်။
ပြီးတော့ နောက်တစ်ခါ နှစ်ရက်လောက်အကြာမှာ ကန်ဒါဟာကိုသွားရတော့ ကဘူးလ်လေဆိပ်မှာ အာဖဂန်ရဲသားက ကျွန်တော့အိတ်တွေကို ဖွင့်စစ်ရင်း မျက်စိတစ်ဘက် မှိတ်ပြပြီး လက်ဖြန့်ပြနေလို့ စိတ်ပျက်ရသေးတယ်။ သကောင့်သားက အင်္ဂလိပ်လိုသာ မပြောတတ်တာ၊ ပိုက်ဆံကတော့ တောင်းတတ်သားပဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုပ်ဝင်းနဲ့ တစ်မိုင်ပျော့ပျော့လောက်ပဲဝေးတဲ့ KAF (Kandahar Airfield) ဆိုရင် သိပ်မဝေးလှတဲ့ အနီးကပ်အတိတ်မှာ တာလီဘန်တွေက လောင်ချာနဲ့ လှမ်းပစ်ပြီး အားပေး တတ်တဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတောင်မှ လုပ်ငန်းခွင်က ဆူညံသံကင်းတဲ့ နေရာမှာ ထိုင်နားနေခိုက်နဲ့ KAF ကို လောင်ချာနဲ့ပစ်တဲ့ အခိုက်ဆုံရင် ထုန်း . . . ထုန်းကနဲ ပစ်သံ ခပ်သဲ့သဲ့နဲ့ ဥသြဆွဲသံ မသဲမကွဲ ကို ဆက်တိုက်ကြားရတတ်တယ်။ ပစ်တဲ့သူကလည်း အဝေးကနေ ရမ်းသမ်းမှန်းဆ ပစ်ရတာဆိုတော့ များသောအားဖြင့် သူတို့လိုရာ ပစ်မှတ်ကို မထိတာများတယ် လို့ဆိုတယ်။ လောင်ချာကျပြီးနောက် အနည်းအကျဉ်း ထိခိုက်သွားတဲ့ သူတွေကို ဆေးခန်းပို့ပြုစု . . . ၊ လောင်ချာကျတဲ့နေရာကို ရှင်းလင်း . . . ၊ ပြီးရင် နိုင်ငံခြား စစ်သည်တွေ လုပ်ငန်းကုမဏီတွေကို စုစည်းနေရာချထားရာ KAF ဟာ ပုံမှန် လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေနဲ့ လည်ပတ်နေပြန်တော့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆောက်နေတဲ့ အဆောက်အအုံရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်ကနေ ငေးမောကြည့်ရင် လူနေအိမ်ခြေတွေတွေ့ရတယ်။ အဲသည် အိမ်ခြေတွေရဲ့ ကျောဘက်က တောင်စွယ်ဘေးက လမ်းအတိုင်းဆက်သွားရင် ကန်ဒါဟာမြို့ကိုရောက်ပါတယ်။ အဲသည်လွင်ပြင်ထဲမှာ အိမ်လုံးလေးတွေ ကျိုးတိုးကျဲတဲနဲ့ . . . ၊ သစ်ပင်မရှိ ဘာမရှိနဲ့ . . . ၊ တစ်ခါတစ်လေ အညိုရောင် သိုးအုပ်တွေနဲ့ သိုးကျောင်းသားတွေကို လှမ်းမြင်ရတယ်။ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းရဲ့ ဟိုဘက် သည်ဘက်မှာ ခြောက်သယောင်း နေတဲ့ တောင်တန်းတွေက မားမားရံလို့ . . . ။
ဟိုး အရှေ့ယွန်းယွန်းမှာ KAF လို့အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ ကန်ဒါဟာလေယာဉ်ကွင်း ဧရိယာ ရှိ တယ်။ လေယာဉ်ကွင်းကနေ ထွက်ထွက်လာချင်း လမ်းမကြီးရဲ့ ညာဘက်မှာ ဟိုး ဆိုဗီယက် ကျူးကျော်စစ် ကတည်းက ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ တင့်ကားပျက်တွေ၊ ထရပ်ကားအပျက်တွေ၊ လေယာဉ် ရဟတ်ယာဉ် အပျက်တွေ . . . ။ အချို့ လေယာဉ်ပျက်တွေက မြေမှာ ဖင်စိုက်ပြီး ထိပ်က ကောင်းကင်ကို မှေျုာ်လို့ . . . ။ အပျက်အစီးတွေက ဟိုတစ်ပုံ သည်တစ်ပုံ ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ . . . ။
ညည အလုပ်နားတဲ့အချိန်မှာ ကောင်းကင်ကို မော်ကြည့်ရင် အနီရောင် အစက်ကလေးတွေ ရွေ့နေတာကို တွေ့ရတတ်တယ်။ အဲဒါပေါ့ဗျ . . . drone ဆိုတာ။ မောင်းသူမဲ့ ကင်းထောက်လေယာဉ်တွေ။ လေထဲကို ပျံတက်ဖို့အတွက်ကျတော့ ဒီကပဲ ထိန်းချုပ်ပြီး လုပ်ပေးရတယ်။ လေထဲမှာ ပျံဝဲနေပြီဆိုတာနဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားကလား ဘာလား . . . အမေရိကန် တစ်နေရာကနေ ဂြိုလ်တုကတစ်ဆင့် ဒီလေယာဉ်တွေကို ထိန်းချုပ်အလုပ်လုပ်သွားတယ်လို့ ပြောကြတာပဲဗျ လို့ ကိုအောင်သန်းထွဋ်က ရှင်းပြတယ်။ တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်နားနဲ့ ပြန်ကြားရတဲ့ အာဖဂန် စစ်သတင်းတွေကို ဆွေးနွေးတတ်ကြတယ်။
အပစ်အခတ်တွေကိုတော့ တစ်ခါမှတိုက်ရိုက်မကြုံရသေးပါဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၀၉ အောက်တိုဘာလ ၂၉ရက်နေ့ ည ၈ နာရီ ၉ နာရီလောက်မှာ တူရကီအင်ဂျင်နီယာနဲ့ ကျွန်တော် နှစ်ယောက်သား punch list အတွက် စာရင်းကောက်နေကြတုန်း ဒုန်းကနဲ အသံအကျယ်ကြီး ကြားရပြီး အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံး လှုပ်ခါသွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လည်း ပြေးထွက်လာ၊ အခြားသူတွေလည်း အသီးသီး အသကအသက ပြေးထွက်လာကြပြီး စူးစမ်းကြတယ်။ အချို့ကလည်း ဘန်ကာဘက်ကို ပြေးကြတယ်။ နောက်တော့ တူရကီ အင်ဂျင်နီယာက ကျွန်တော့်ဆီကို အပြေးပြန်ရောက်လာပြီး ရှင်းပြတယ်။ `ဗုံးတော့ ဗုံးပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိစ္စရှင်းသွားပြီလို့ ပြောတယ်။ ဗြိတိသျှတပ်တွေက ဒီအနီးအနားမှာ ဗုံးတစ်လုံးတွေ့တာနဲ့ စနက်တံဖြုတ်မရလို့ အကာအကွယ်ယူပြီး ဖေါက်ခွဲလိုက်တာလို့ပြောတယ်´ လို့ ပြန်လာ ပြော တယ်။
မနက် မနက်ကျရင် မလှမ်းမကမ်း အာဖဂန်ရဲတပ်ဖွဲ့ လေ့ကျင့်ရေးသေနတ်ပစ်ကွင်းမှာ တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ ပစ်နေကြတာကို ကြားရတတ်တယ်။ တစ်ခါတလေ ကင်းလှည့်လာကြတဲ့ အမေရိကန် စစ်ယာဉ် တစ်အုပ်စု ကျွန်တော်တို့ စခန်းဝင်းထဲကို ၀င်လာနားတာကို တွေ့နိုင်တယ်။ အဲသည် စစ်ယာဉ်တန်းတွေဟာ များသောအားဖြင့် KAF လာကြတာပါ။ တိုက်ပွဲဝင်ယာဉ် (armored vehicle) တွေကနေဆင်းလာပြီး စီးကရက်လေးသောက်လိုက် ဘ၀တူ အမျိုးသားစစ်သည်တွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး နောက်လိုက်ပြောင်လိုက် လုပ်နေကြတဲ့ အမေရိကန်စစ်သမီးတွေကို အာဖဂန် အလုပ်သမားတွေက အထူးအဆန်းသဖွယ် လှမ်းငေး ကြည့်နေကြတာကိုလည်း မြင်နိုင်တယ်။
အာဖဂန် အလုပ်သမားတွေ၊ ဥဇဘက်လူမျိုးနဲ့ ရုရှားလူမျိုး အလုပ်သမားတွေ၊ ပါကိစ္စတန်အရာရှိနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး အရာရှိတို့ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ကြတဲ့ ဒီပရောဂျက်ကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ နှစ်ယောက်က ဦးစီးပါတယ်။ KAF က လောင်ချာသံနဲ့ သေနတ်ပစ်ကွင်းက သေနတ်သံ တွေ၊ စစ်ဖိနပ်သံ တဖြောင်းဖြောင်းတို့ဟာ ကြာလာတော့ ရိုးသွားပါတယ်။
အစားအသောက်ကောင်းကောင်း အလျှံပယ် . . . အသုံးအဆောင် အထောက်အကူ အပြည့်အစုံနဲ့ အ၀တ်လျှော်ဖို့ကအစ ပူစရာမလိုပဲ နိုင်ငံတကာ အရာရှိတစ်ယောက်အနေနဲ့ မပူမပင် မကြောင့်မကြနေရပေမယ့်လို့ အင်ဂျင်နီယာအလုပ်နဲ့ ဆယ်စုနှစ် တစ်စုလောက် ကင်းကွာနေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုက အစဉ်ရှိနေခဲ့တယ်။
Ah! How beautiful is Kabul encircled by her arid mountains.
And, Rose, of the trials of thorns she envies.
Her gusts of powdered soil, slightly stings my eyes.
But I love her, for knowing and loving are born of this same dust.
အာဖဂန်ရှေးစာဆိုတစ်ယောက်ကတော့ ခြောက်သယောင်းနေတဲ့ တောင်တန်းတွေနဲ့ ၀န်းရံထားတဲ့ ကဘူးလ်မြို့တော်ဟာ လှပပါဘိတောင်းရယ်လို့ ဆိုရှာတယ်။
စိမ်းညို့ညို့တောင်တန်းတွေနဲ့ မျက်စိယဉ်ပါးနေတဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့ရာ လေယာဉ်ပေါ်ကနေ ငုံ့ကြည့်လိုက်ရင် တစ်ခွင်တစ်ပြင်လုံး သဲရောင်ထနေတဲ့ အောက်မြေပြင် မြင်ကွင်းဟာ လှပတယ်လို့ မဆိုသာပါဘူး။ သစ်ပင်ဝါးပင်ရယ်လို့ ဘာမှမရှိပဲ အမြှောင်းလိုက် အမြှောင်းလိုက် တည်ရှိနေတဲ့ တောင်တန်း ၀ါညိုညိုတွေကို ချစ်စရာလို့မြင်နိုင်တဲ့ စာဆိုကတော့ ဒီရေဒီမြေကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ စာဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကဘူးလ်ကို ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့အခေါက်မှာ ကျွန်တော့်ကို အာဖဂန်လူမျိုး တစ်ယောက် လာကြိုမယ်လို့ သိထားတယ်။ ကျွန်တော် လေဆိပ်ကထွက်လာပြီး ယောင်လည် လည်နဲ့ ရပ်နေစဉ်မှာ အာဖဂန်လူမျိုးတစ်ယောက်က စက္ကူအလိပ်တစ်လိပ်ကိုကိုင်ပြီး လူတွေကို ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့်လုပ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီ ထောင်ထောင် မောင်းမောင်း အာဖဂန်ကြီးဟာ ငါ့ကို လာကြိုနေတာပဲ ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး သူ့ကို သွားမေးတော့ ပုဂ္ဂိုလ်က အင်္ဂလိပ်လို နားမလည်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ လက်ဟန်ခြေဟန်ကို နားလည်တဲ့ သကောင့်သားက သူ့လက်ထဲက စက္ကူလိပ်ကို ဖြန့်ပြတယ်။
အစ်ဒ်ပွဲတော် အားလပ်ရက်အနေနဲ့ ဒုတိယတစ်ခေါက် ကဘူးလ်ကို ရောက်တဲ့အခါ ကျမှ မြန်မာအိမ်ကို ကျွန်တော်သွားနေဖြစ်တယ်။ စက်တင်ဘာလ ၁၉ရက်နေ့ပေါ့။ ကဘူးလ်လေဆိပ်ကနေ မြန်မာအိမ်ကိုလာ၊ ပြီးတော့ အ၀တ်အစားတွေလဲပြီးတော့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲချက်မလို့ လုပ်နေတုန်း ထိန်းကနဲဆို အသံအကျယ်ကြီးကြားရပြီး ကျွန်တော့် စိတ်အထင် အဆောက်အအုံတောင် မသိမသာလှုပ်သွားသလို ခံစားရတယ်။ ခဏနေတော့ ဖုန်းဝင်လာတယ်။ အခုနက လေဆိပ်ကနေ ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လာတဲ့ လမ်းမှာ ဗုံးပေါက်တာ တဲ့။
ကျွန်တော်နဲ့ နောက်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ကို သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ (fresher welcome) လုပ်တဲ့ အနေနဲ့ သောက်ပွဲစားပွဲလေးတစ်ခု မြန်မာအိမ်မှာ ကျင်းပတယ်။ အရက်ပြင်းများများ သောက်ချင်ကြပေမယ့် ဂျော်နီဝေါ့ကား ရက်လေဘယ်တစ်လုံးကို မှောင်ခိုဈေးနဲ့ ဒေါ်လာ၁၅၀ လောက်တောင်း နေကြတော့ ဗော်ဒကာနှစ်လုံးရယ်၊ အတောမသတ်နိုင် တဲ့ ဟန်နီကန် ဘီယာဗူးတွေနဲ့ပဲ ကျေနပ်လိုက်ကြရတယ်။
မြန်မာအိမ်မှာ ထမင်းလာချက်တဲ့ ထမင်းချက်က နေ့တိုင်း ကိုယ်ပိုင်ကားစီးပြီး အလုပ် လာတာဗျ။ ပေါ့သေးသေးမထင်နဲ့။ တိုင်းပြည်ရဲ့လူများစုက ဆင်းရဲပေမယ့် တော်ရုံတန်ရုံ ၀င်ငွေလေးရှိရင် ဟန်းဖုန်းလေးဘာလေး ၀ယ်နိုင်တယ်။ ကားဝယ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကဘူးလ်မြို့ထဲမှာ လူတော်တော်များများ ဟန်းဖုန်းကိုင်နေကြတာကို တွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော့ဆီမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ပန်းရံ၊ လက်သမားတွေလည်း ဟန်းဖုန်းတွေ ကိုယ်စီနဲ့ ပါပဲ။ (ကျွန်တော် အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုရောက်နေတဲ့ အဲသည် အချိန်တုန်းက မြန်မာပြည်မှာ ဟန်းဖုန်း နံပါတ်တစ်ခု ကိုင်ရဖို့အတွက် ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ တန်ဖိုးနဲ့ညီမျှတဲ့ မြန်မာငွေပမာဏကို အနည်းဆုံးအောက်ထစ် ပေးဝယ်နေရတဲ့ အချိန်ပေါ့။)
အခု အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ မြန်မာလူမျိုး အနည်းဆုံး ၁၂ ယောက်လောက်ရှိတယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အဆင့်တစ်ခုခု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်တစ်ခုခုနဲ့ အလုပ်လာလုပ်ကြတဲ့ သူတွေ ချည်းပဲ ဆိုပါတော့ . . . ။ အာဖဂန်နစ္စတန်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ်လောက်ကတည်းက ရောက်နေတဲ့ ကိုခင်ထွန်းက` ဒီကိုရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေက အဆင့်လေးဘာလေး တစ်ခုနဲ့ ရောက်လာကြတာဆိုတော့ မြန်မာဆိုရင် အထင်တော့ မသေးဘူးဗျ´ လို့ဆိုတယ်။ `ဒါပေမဲ့ ဟိုး ရောက်ခါစတုန်းကဆိုရင် မြန်မာလို့ ပြောလည်း ဘားမားလို့ ပြောပြလည်း ဘာမှန်းမသိကြ တော့၊ ဒါနဲ့ . . . မင်းတို့ ဂျပန်ဆိုတာကော သိကြသလား လို့ကျွန်တော်မေးတယ်ဗျ။ သူတို့က သိတယ်လို့ ပြောတော့၊ အေးမှတ်ထား မြန်မာဆိုတာ ဂျပန်နဲ့ အတူတူပဲလို့။ ဒီလို နားသွင်း ထားလိုက်တာ ကျွန်တော်တို့ကို အထင်တွေ စွတ်ကြီးနေကြပါလေရော။ ဒါနဲ့ သိပ်မကြာဘူး။ နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်တော့ မြန်မာပြည်သတင်းက စီအန်အန်တို့ ဘာတို့မှာ ပြူးတူးပြဲတဲ နှစ်ဆယ့်လေးနာရီ ပါလာတော့၊ ဒီမှာကြည့် ဒီမှကြည့် မင်းတို့နိုင်ငံမင်းတို့နိုင်ငံ ဆိုပြီး လူတကာက လက်ညိုးထိုးပြတယ်ဗျ။ ဒီတော့မှ ဘယ်လိုတိုင်းပြည်မျိုးကလာတယ် ဆိုတာ သူတို့ သိသွားတာ´ လို့ပြော ပြရင်း ကိုခင်ထွန်းက တ၀ါးဝါး တဟားဟားရယ်ပါတယ်။
အဲသည် အားလပ်ရက်ယူနေတဲ့ ရက်တွေအတောအတွင်း အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ကဘူးလ် ကုမဏီရုံးကိုအသွား လမ်းဆုံတစ်နေရာမှာ ဘာကြောင့်ရယ်မှန်းမသိ သုံးနာရီယောက် လမ်းပိတ်နေပါလေရောဗျာ။ ဓါတ်ပုံလေးဘာလေး ဆင်းရိုက်မယ်ဆိုတော့ အားလုံးက ၀ိုင်းတားကြတယ်။ ကားပေါ်မှာ ဒီအတိုင်းပဲထိုင်နေပေါ့။ `စာရေးဆရာကြီး၊ ကုန်ကြမ်းရှာနေတာလား။ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် ကုန်ကြမ်းဖြစ်သွားမယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်ကို ဘာထင်နေသလဲ´ လို့ ဂရုဏာဒေါသောနဲ့ ပြောကြတယ်။
တစ်ခါတလေကျတော့ အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေ ကားမောင်းနေတာကို တွေ့ရတတ် တယ်။ တချို့ လမ်းဆုံလမ်းခွတွေမှာ ယာဉ်ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်သွားပြီဆိုရင် ရှင်းရတာအကြာကြီးပဲ။ ယာဉ်ထိန်းရဲတွေက ကားသမားတွေကို ငေါက်ငမ်းတာလည်းတွေ့ရတယ်။ ပြောမရ ဆိုမနိုင်တဲ့ ကားသမားတွေရဲ့ ဘောနက်ကို လက်ကိုင်တုတ်နဲ့ထုတာလည်း လှမ်းမြင်ရတယ်။ ဒါနဲ့ မိတ်ဆွေ အင်ဂျင်နီယာ ဦးမင်းထွန်းက လှမ်းပြောတယ်။
`ဟား . . . ဟား . . . ဟား . . . ။ တစ်ခါတလေကျတော့ ကားသမားတွေက ယာဉ်ထိန်းရဲကို ဆွဲထိုးသွားတယ်ဗျ။ ဘယ်ကားသမားက ဘာကောင် ဘယ်ကားသမားက ဆရာကြီးဆိုတာကို သိနိုင်တာမှ မဟုတ်တာ။´
ကျွန်တော်တို့ စကားပြောနေတုန်းမှာပဲ စိတ်မရှည်နိုင်တဲ့ ကားသမားတစ်ယောက်က လမ်းပြောင်းပြန်တက်မောင်းတယ်။ ပလက်ဖောင်းကို ကျော်တယယ်၊ ခွတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရလဒ်က တစ်ဘက်ကလာတဲ့ ကားလည်း သွားလို့မရ၊ သူလည်းရှေ့တိုးလို့မရ ဖြစ်ကုန်ရော။ တစ်ခါတလေ ဘယ်လိုမှရှင်းလို့မရရင် ယာဉ်ထိန်းရဲလည်း ဘာမှ မလုပ်တော့ပဲ လမ်းဘေးမှာ သွားထိုင်နေတာကို တွေ့ဖူးတယ်ဗျ။ ကားသမားတွေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ ရှင်းကြတော့ ဆိုပြီး လက်လျှော့လိုက်တာ။
ဒီနေ့ မျက်စိရှေ့က ယာဉ်ပိတ်ဆို့မှု ဇာတ်လမ်းက ဘယ်လို အဆုံးသတ်မလဲတော့မသိ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကားကိုဒရိုင်ဘာနဲ့ထားခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့ အာဖဂန်လက်ထောက် တစ်ယောက်က ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ တားပေးထားတဲ့ တက္ကစီကို တက်စီးပြီး ခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။
ငွေ၊ လက်နက်၊ အာဏာ
၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ အယ်လ်ကေဒါအဖွဲ့က ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှု အဆောက်အအုံကို လေယာဉ်နဲ့ ၀င်တိုက်ပြီး ဖေါက်ခွဲ ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။ အဲသည် ၉/၁၁ အဖြစ်အပျက်မတိုင်မီ နှစ်ရက်အလို စက်တင်ဘာလ ၉ရက်နေ့မှာ အိုစမာဘင်လာဒင်ဟာ အယ်လ်ကေဒါ အေးဂျင့် နှစ်ယောက်ကို သတင်းထောက် အယောင်ဆောင်ခိုင်းပြီး အာဖဂန်နစ္စတန် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ အကြီးအကဲ အာမက် ရှား မာဆွတ် ကို အသေခံ ဗုံးခွဲ သတ်ခိုင်းခဲ့တယ်။ အိုစမာရဲ့ လက်ရာနှစ်ခုက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု နှစ်ရက်ပဲ အချိန်ကာလ ကွာခြားပါတယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်ကို အဲသည်အချိန်က အုပ်စိုးနေတဲ့ တာလီဘန် အစိုးရက အယ်လ်ကေဒါအဖွဲ့ကို အကာအကွယ်ပေး၊ အခြေချစရာနေရာပေးထားတဲ့အတွက် အတုံ့အလှယ်သဘောနဲ့ အယ်လ်ကေဒါအဖွဲ့ကလည်း တာလီဘန်တွေကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက် နေတဲ့ မြောက်ပိုင်း မဟာမဟာမိတ်တပ်တွေရဲ့ အကြီးအကဲ မာဆွတ်ကို လုပ်ကြံပေးတာဖြစ်ပါ တယ်။
ဒါပေမဲ့ မာဆွတ်ချထားခဲ့တဲ့ အစီအစဉ်တွေအတိုင်း တာလီဘန်အစိုးရကို ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့ တယ်။ မာဆွတ်ဟာ ယနေ့ထက်တိုင် ကျန်ရစ်သူတွေက လေးစားရတဲ့ အာဖဂန် အမျိုးသား အာဇာနည် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
`ခေါင်းဆောင်ကြီး မာဆွတ် ကျဆုံးသွားတာကို သိရတော့ ကျွန်တော်တို့ အကုန်လုံး ငိုမိကြတယ်´ လို့ အဲသည်တုန်းက မာဆွတ်ရဲ့ မူဂျာဟစ်ဒင်တပ်မှာ အရာရှိငယ်အဆင့်နဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့၊ အခုအချိန်မှာ အသက်လေးဆယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့် လက်ထောက် မစ္စတာ အာမက်ဇဟားက ပြန်ပြောင်းပြောပြတယ်။
မစ္စတာဇဟားဟာ အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီမှာ ကြီးကြပ်ရေးမှူး (supervisor) တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာ လေးငါးနှစ် လောက်ရှိပါပြီ။ အင်္ဂလိပ်စကားကို ကောင်းကောင်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောတတ်တယ်။ အာဖဂန်နစ္စတန်သုံး ဘာသာစကားတွေဖြစ်တဲ့ ဒါရီ၊ ပက်စ်တို၊ ဖာရစီဘာသာစကားတွေကိုလည်း မိခင်ဘာသာစကားအနေနဲ့ ပြောတတ်တယ်။ (သူ့အဖေက ပုရ်ှထွန်းလူမျိုး၊ သူ့အမေက တာဂျစ်လူမျိုး။) ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းပေမယ့်လို့ သာမညောင်ညမမှတ် လေနဲ့။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။
`မဇာရီရှရစ်ကို လိုင်းဆွဲနေတဲ့ ဘတ်စ်ကားနှစ်စီးကို ကျွန်တော်ပိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဘတ်စ် ကား နှစ်စီးကနေ တစ်လ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ကနေ ၅၀၀၀ကြားရပါတယ်။ ပုံမှန်တော့ မရှိပ်ဘူး။ ဒီကုမ္ပဏီကနေရတဲ့လစာကတော့ ကျွန်တော့် ကလေး ခြောက်ယောက်အတွက် ကျောင်းစရိတ်လေး ဘာလေးရတာပေါ့´ လို့ မစ္စတာဇဟားက ဆိုပါတယ်။ ဇဟားက သူ့ကလေးတွေကို ဈေးကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာ ထားတာနော်။
ဘတ်စ်ကားတွေတင်မကပဲ မစ္စတာဇဟားမှာ ကျွန်တော့်ကို ပြောမပြတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အဝေးပြေးလမ်းမတော်တော်များများကို တာလီဘန်တွေက စီးနင်းထားလို့ ပို့တောင်ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲနေတဲ့ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကိုလည်း မစ္စတာဇဟားလုပ်တယ်လို့ ပြောတဲ့လူက ပြောကြတယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ကြုံရတဲ့ တာလီဘန်တွေနဲ့ စာရင်းရှင်း ချောဆီထည့်ပြီး ကုန်စည်ကို လိုရာပို့ဆောင်ပေးရတဲ့ အလုပ်မျိုးပေါ့။
ကျွန်တော် အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုမရောက်ခင်လေးတင် ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီလောက်က မစ္စတာဇဟားဟာ ခွင့်တစ်ရက်လောက်ပေးပါလို့ ပြောပြီး သုံးလေးပတ် လောက် ပျောက်သွားခဲ့တယ်လို့ အဆိုရှိပါတယ်။ ဟာမစ်ကာဇိုင်းနဲ့ ဒေါက်တာအဗ္ဗဒူလာတို့ ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါက်တာအဗ္ဗဒူလာ ဘက်ကနေ ကျေးရွာအရောက်ကွင်းဆင်း စည်းရုံးမှုတွေ လုပ်နေခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတော့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြန်ရောက်လာတယ်။ တကယ့်လူ . . . ။
မစ္စတာဇဟားတစ်ယောက် အခုလောလောလတ်လတ်မှာ ဘယ်သူ့ဘက်တော်သား ဖြစ်နေတယ်ရယ်လို့ ကျွန်တော် မသိနိုင်ပါဘူး။ အမေရိကန်တွေနဲ့လည်း အလုပ်လုပ်တယ်။ တာလီဘန်တွေနဲ့ စကားပြောစရာရှိရင်လည်း ဒီလူပြောမှာပဲလို့ သံသယရှိတဲ့လူက ရှိကြတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံရေးမှာလည်းပါတယ်။ ပက်ရ်ှထွန်းလူမျိုးပေမယ့်လည်း နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းက တာဂျစ်လူမျိုးတစ်ယောက် ခေါင်းဆောင်တဲ့ မူဂျာဟစ်ဒင်လှုပ်ရှားမှုထဲမှာ ကာလရှည်များ ပါဝင် ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတယ်။ လောလောဆယ် သူ့မှာဂွကျနေတာတစ်ခုကတော့ မုတ်ဆိတ်ရှည်တာကို မကြိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ မုတ်ဆိတ်ရှည်ထားတာကို တန်ဖိုးထားကြတဲ့လူတွေကြားမှာ ဗျာများရ တတ်တာပါပဲ။
“ကျွန်တော့မုတ်ဆိတ်က အရင်က ဒီထက်ရှည်တာပေါ့။ တစ်ခါက အစည်းအဝေး တစ်ခုကိုတက်စရာရှိတော့ဗျာ . . . သိပ်အဆင်မပြေမှာ စိုးတာနဲ့ နည်းနည်းတိုအောင် ညှပ်လိုက်ရတယ်။” လို့ မစ္စတာဇဟားကဆိုပါတယ်။
အရင်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ဟာမစ်ကာဇိုင်း ဘက်တော်သားဖြစ်ခဲ့ပြီး အခုရွေးကောက်ပွဲ ကျတော့ ဒေါက်တာအဗ္ဗဒူလာဘက်ကနေ ဘာလို့ လှုပ်ရှားရတာလဲလို့ ကျွန်တော်က မေးတော့ “တိုင်းပြည်အတွက် အပြောင်းအလဲ တစ်ခုခုများ ဒေါက်တာအဗ္ဗဒူလာ ဆောင်ကြည်းပေးလာနိုင်မလား ဆိုပြီး မျှော်လင့်လို့ပါ” လို့ သူကဖြေတယ်။
အာဖဂန်နစ္စတန်သမ္မတ ဟာမစ်ကာဇိုင်းရဲ့ညီ အာမက်ကာဇိုင်း တစ်ယောက် ဘိန်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပက်သတ်နေတယ်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အမေရိကန် စီအိုင်အေရဲ့လစာကို စားနေတဲ့သူလည်းဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို ကြားရတယ်ဗျာ၊ အဲဒါကို ခင်ဗျား ဘယ်လိုယူဆ သလဲ ဆိုတော့ မစ္စတာဇဟားက ဒီလိုဖြေတယ်။ “ခါလီဖာ ကျော်ဇောဦး၊ အဲဒီအချက် နှစ်ချက်က ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရုံသက်သက်မဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်ကို ဖြစ်နေတာ။ ဟာမစ်ကာဇိုင်းရဲ့ ညီအစ်ကိုတွေက အမေရိကမှာ အများကြီးပဲဗျာ။ သူတို့တစ်တွေ အမေရိကန်တွေနဲ့ ပတ်သက်နေတာ ကြာလှပြီပဲဗျာ။ ပြီးတော့ ဒီနိုင်ငံမှာ ဘိန်းလုပ်ငန်း ၊ဒါမှမဟုတ်၊ ဘိန်းကလာတဲ့ငွေနဲ့ ကင်းနိုင်တဲ့ သူကလည်း အရှားသားလားဗျာ . . . ” လို့ဆိုတယ်။
ဟာမစ်ကာဇိုင်းရဲ့ ဒုတိယသမ္မတ အနေနဲ့ ရွေးကောက်ခံဖက်ဖြစ်လာတဲ့ မိုဟာမက် ဖာဟင်းမ်ရဲ့ နောက်ကြောင်း သတင်းဆိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးသေးတယ်။
“ငွေရှိအောင် အရင်လုပ်ရတာပေါ့ဗျာ။ ဘိန်းလုပ်ငန်းလုပ်ရင်း ပိုက်ဆံများများ ကိုင်လာနိုင်ရင် လက်နက်များများ ၀ယ်လာနိုင်တယ်။ လက်အောက်ငယ်သားတွေကို လစာပေးလာနိုင်တယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံရေး သြဇာကြီးလာတယ်။ သူ့ကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ ခက်လာတာပေါ့ . . . ” လို့ဆိုတယ်။
“အချို့သော အမေရိကန် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘိန်းလုပ်ငန်းနဲ့ မကင်းဘူး . . . လို့ အဲဒီလုပ်ငန်းဘက်က ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေ အရပ်သားတွေက ပြောတယ်ဗျ။ အမေရိကန်တပ်သုံး လေယာဉ်တွေကို ဘာတွေသယ်သွားသလဲ ဆိုပြီးတော့ ဘယ်သူကမှ စစ်ဆေးနေတာမှမဟုတ်တာ။ အဲဒီအမေရိကန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတွေကပဲ သူတို့နိုင်ငံကို အလုံးအရင်းနဲ့ ဘိန်းတွေတင်သွင်းနေတယ်လို့ ပြောတဲ့လူက ပြောတာပဲဗျ” လို့ မစ္စတာဇဟားက ပြောတော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေရဲ့လို့ ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။
ဒီနေရာမှာ မစ္စတာဇဟားအကြောင်းကို ကြားပြီးတဲ့အခါကျတော့ စာဖတ်သူတွေက မစ္စတာဇဟားကို လူရည်လည် လူရည်တတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မြင်ကောင်းမြင်လာပါလိမ့် မယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာ မစ္စတာဇဟားဟာ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်တွေက အားကိုးအားထားပြုနိုင်တဲ့သူ၊ မိသားစုနဲ့ ဇနီးမယားကို ချစ်ခင်တဲ့သူ၊ ပတ်ဝန်းကျင်က လေးစားခြင်းကို ခံရတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာ ကျွန်တော် မငြင်းသာပါဘူး။
အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် မြန်မာပြည်ကို ရောက်ရင် ရေးကောင်းရေးဖြစ်မယ်။ ဒီတော့ လိုလိုမည်မည် မစ္စတာဇဟားရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ၊ မိသားစု ဓါတ်ပုံတွေ ရနိုင်မလားလို့ ကျွန်တော်က မေးတော့ “ရှိတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက မူဂျာဟစ်ဒင်တပ်သားဘ၀တုန်းက ပုံတွေ အခုထက်ထိရှိသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟိုတုန်းကပုံတွေ က ဒစ်ဂျစ်တယ်ကော်ပီ မဟုတ်တော့ စကန်ဖတ်ပြီး စီဒီထဲကို ထည့်ပေးမှရမယ်။ ကဘူးလ်ကို ခွင့်ပြန်တဲ့အခါကျမှ ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်” လို့ဆိုတယ်။
မူဂျာဟစ်ဒင်တပ်သားလေး ဇဟားဟာ အရွယ်ကောင်းကောင်း ထက်ထက်မြက်မြက် ဆိုတော့ အရာရှိတွေက သူ့ကို ကဘူးလ် တက္ကသိုလ်ကို ပို့ပေးတယ်။ ကဘူးလ်တက္ကသိုလ်မှာ English Literature အဓိကနဲ့ ဘွဲ့ရတယ်။ ဘွဲ့ရပြန်တော့ မူဂျာဟစ်ဒင်ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး အရာရှိတစ်ယောက်အနေနဲ့ အာဂျစ်ကစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်၊ အန္ဒိယနဲ့ ဥရောပကို ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် သွားရလာရတယ်။ ဌာနေကို ပြန်ရောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်း တိုက်ပွဲတွေ အလီလီ ကြုံရဆုံရတယ်။ ပြီးတော့ . . . အိမ်ထောင်ကျ . . . ၊ အာဖဂန်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ နေရာ တစ်ရောရအောင် ကြိုးပမ်း . . . ။ နိုင်ငံရေးမှာ အတက်အကျကြုံရ . . . ။ ဟာမစ်ကာဇိုင်းအုပ်စုနဲ့ အခန့်မသင့်တာတွေ ဖြစ်ပျက်ပြန် . . . ။ ဒေါက်တာအဗဒူလာဘက်ကို ပြောင်း . . . ။ ဒါတွေဟာ ဒီနေ့ မစ္စတာဇဟားဖြစ်လာတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ခံကောက် ကြောင်းပေါ့။ သူ့ရဲ့ ဘ၀ကိုယ်၌မှာလည်း “ငွေ၊ လက်နက်၊ အာဏာ” ဆိုတဲ့ ဓါတ်ကြီးသုံးပါး စိုးမိုးချယ်လှယ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါတောင်မှ မစ္စတာဇဟားဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာ အသေးအမွှား အရံသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပါ။
အရပ်သားတွေ လက်နက်ကိုင်ပြီးလမ်းသလားခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံ၊ ခင်ဗျားသာ ပိုက်ဆံရှိရင် လုံခြုံရေးအယောက်တစ်ရာကို လက်နက်တပ်ဆင်ပြီး ငှားထားဖို့ ဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံ၊ ခင်ဗျားသာ လစာမပေးနိုင်ရင် အဲဒီလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေက ခင်ဗျားကို ကျည်ဆန်စာကျွေးသွားမယ့်နိုင်ငံ။ အဲသည် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ဘ၀အာမခံချက်နဲ့ဘ၀တက်လမ်းကို ငွေ၊ လက်နက်၊ အာဏာ သုံးခုနဲ့ တဖြည်းဖြည်းချင်း တည်ဆောက်လာတဲ့ သူတွေကသာလျှင် နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံပေါ်ကို ရောက်လာကြတာဖြစ်တယ် . . . လို့ ဆိုတဲ့လူက ဆိုကြတယ်။
၁၀ ရက်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်
ကျွန်တော်တို့ဆောက်နေတဲ့ ပရောဂျက်ကို ပင်မကန်ထရိုက်ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီက လွှဲပြောင်းလက်ခံယူဖို့ လာရောက်စစ်ဆေးတယ်။ အတိုအထွာပြုပြင်ပေးစရာရှိတာကို ပြုပြင်ပေးဖို့ ရှိသေးတာကလွဲရင် ပရောဂျက်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးကြောင်း အတည်ပြုလိုက်လို့ လုပ်ငန်းရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့် ပြီးစီးသွားတယ်။ ပတ်စာခွာ ဖျာသိမ်းပြီးလို့ သွားစရာရှိတဲ့ နေရာကို ဆက်သွားရန် ပြင်ဆင်ဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက် မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်ပြီး တင်းမာနေကြတဲ့ တစ်ဘက် ပင်မကန်ထရိုက်တာ ကုမ္ပဏီက တူရကီ အင်ဂျင်နီယာနဲ့လည်း ချက်ချင်းပဲ အခေါ်အပြော ပြန်လုပ်နိုင် . . . အပြုံးမပျက် စကားပြောနိုင်လာကြတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ပုခုံးပေါ်က ၀န်ထုပ်တစ်ခု လျော့သွားပေသကိုး . . . ။
ဒီနေ့ နေ့လယ် ထမင်းစားပြီးတော့ ဆိုက်ထဲကို ဆင်းလျှောက်ကြည့်တယ်။ ပရောဂျက်အပ်လိုက်ပြီဆိုပေမယ့် အတိုအထွာ ပြင်ဆင်ရန် (punch list) က ရှိနေသေးတယ် လေ။ ဆေးသုတ်သမားတွေက ဆိုက်တစ်ခွင်မှာရှိနေတဲ့ manhole (မြေအောက်ပေါက်) အဖုံးတွေမှာ အမှတ်အသားရေးခြယ်တဲ့အရောင်တွေ တလွဲ သုတ်ထားတာကိုတွေ့တယ်။ မိလ္လာလိုင်းအတွက် အ၀ါရောင်၊ ရေပိုက်လိုင်းအတွက် အပြာရောင်၊ လျှပ်စစ်လိုင်းအတွက် အနီရောင်ဖြစ်ရမှာ . . . ။ သူတို့သုတ်တဲ့ အရောင်တွေက လွဲနေတယ်။ ဒါနဲ့ ဆေးသုတ်သမား နှစ်ယောက်ရယ် စကားပြန်ရယ်ကို လှမ်းခေါ်ပြီး ရှင်းပြရတယ်။ လျှပ်စစ်က ရှော့ခ်ဖြစ်လို့ မီးလောင်ရင် မီးရဲ့အရောင်က နီတယ်ကွာ။ ဒါကြောင့် လျှပ်စစ်လိုင်း မြေအောက်ပေါက်ရဲ့ အဖုံးမှာ “E” စာလုံးအကြီးကြီးကို အနီရောင်သုတ်။ ရေတွေရှိနေတဲ့ ပင်လယ်ရဲ့အရောင်က ပြာတယ်ကွာ။ ဒါကြောင့် ရေပိုက်လိုင်း manhole ရဲ့ အဖုံးပေါ်မှာ “W” စာလုံးအကြီးကြီးကို အပြာရောင်နဲ့ ရေး။ လူတွေရဲ့ မစင်က ၀ါတယ်ကွာ။ ဒါကြောင့် မိလ္လာလိုင်းရဲ့ manhole အဖုံးမှာ “S” စာလုံးအကြီးကြီးကို အ၀ါရောင်သုတ် လို့ ရှင်းပြတော့ တ၀ါးဝါး တဟားဟား ရယ်ကြတယ်။
အရွယ်ရောက်သူတွေရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက်ပဲ စာတတ်မြောက်ကြတဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ကျောင်းဆရာတစ်ဖြစ်လဲ စာရေးဆရာတစ်ဖြစ်လဲ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဖြစ်လဲ ငါကိုယ်တော်ချောဟာ ဒီလိုမျိုး စိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့ ရှင်းပြတတ်လေတော့ ငါဟာ အနူတောမှာ လူချောပါတကား ဆိုပြီး . . . ခါလီဖာ ကျော်ဇောဦးတစ်ယောက် စိတ်ကြီးဝင်မိလေသတတ်။
(ဒီဆောငျးပါးကို ကြျောဇောဦး အာဖဂနျနစ်စတနျမှာ အငျဂငျြနီယာတဈဦးအဖွဈအလုပျလုပျနခေဲ့စဉျကာလက ရေးသားခဲ့တယျ။ ၂၀၀၉ နှဈနှောငျးပိုငျးမှာ ဒီဆောငျးပါးကို အပိုငျးသုံးပိုငျးခှဲပွီး မွနျမာတိုငျးမျက ပုံနှိပျဖျေါပွခဲ့တယျ။)
ကမ်ဘာပျေါမှာ ဘိနျးအမြားဆုံး ထုတျလုပျတဲ့ နိုငျငံကို ကြှနျတျော ရောကျနတော နှဈလကြျောသုံးလလောကျရှိပါပွီ။ ဘိနျးကရတဲ့ ဝငျငှတှေနေဲ့ နိုငျငံရေးအာဏာကို ပိုမို ခိုငျမာ အောငျ လုပျတတျကွတဲ့ အာဖဂနျနစ်စတနျ။ ဘိနျးဝငျငှအေားဖွငျ့ နောကျခံလကျနကျကိုငျတပျ တှကေို ပိုမိုအားကောငျးအောငျ တညျဆောကျကွတတျတဲ့ စဈဘုရငျတှရှေိရာ အာဖဂနျ နစ်စတနျ ပေါ့ . . . ။
ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလထဲမှာ ကဘူးလျမွို့တျောကို အဈဒျ ပှဲတျော အားလပျရကျ ခွကျေရကျလောကျ သှားနားနခေဲ့တာကလှဲရငျ အာဖဂနျနစ်စတနျရဲ့ ဒုတိယအကွီးဆုံး မွို့ဖွဈတဲ့ ကနျဒါဟာမှာ ကြှနျတျောနရေတယျ။ ဒီထကျပိုပွီး အသေးစိတျကကြ ပွောရရငျ ကနျဒါဟာမွို့နဲ့ ကနျဒါဟာ လဆေိပျကွား တဈနရောက စခနျးဝငျးကွီးတဈခုထဲမှာ ကြှနျတျောနပေါတယျ။
ပရိဘောဂ အသုံးအဆောငျ အပွညျ့အစုံတပျဆငျထားတဲ့ ကှနျတိနျနာအိမျ (conex) တဈလုံးထဲမှာ ကြှနျတျောနပေါတယျ။ (အဲသညျ ကှနျတိနျနာအိမျတဈလုံးရဲ့ တနျဖိုးက ဒျေါလာ ၉၈၀၀ ဆိုပဲ . . . ။) ကြှနျတေျာ့ conex နဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျမှာ ဗုံးဘနျကာတဈခုရှိတယျ။ ဘနျကာရဲ့ အပျေါနားလောကျမှာ အရေးပျေါဥသွတဈခု ခြိတျထားတယျ။
ကြှနျတေျာ့ အခနျးကနေ ခွလှေမျးထှကျလိုကျရငျပဲ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ဆောကျလုပျရေး အလုပျခှငျကို ရောကျတယျ။ ဆိုလိုတာက အဲသညျ အလုပျခှငျထဲမှာပဲ ကြှနျတျော နပေါတယျ။ ဒီတော့ အလုပျခှငျကနေ အိမျကို အသှားအပွနျလုပျရငျး ပွနျပေးဆှဲခံရတာတို့၊ ပဈသတျခံရတာတို့ မရှိနိုငျတော့ဘူးပေါ့။ အလုပျခှငျကို ဝငျတိုကျတာတို့ . . . ၊ လောငျခြာနဲ့ လှမျးပဈတာတို့ မကွုံရရငျပေါ့လေ။
အခနျးထဲက ကြှနျတေျာ့ လကျပျတော့ပျ ကြှနျပြူတာကို ၀ိုငျယာလကျ ကှနျနကျရှငျးနဲ့ အငျတာနကျခြိတျထားတာ မို့လို့ ကြှနျတေျာ့ ဂြီမေးလျက အှနျလိုငျးပျေါကို ရောကျနတေတျပမေယျ့ လူကိုယျ၌ကတော့ အခနျးပွငျက အလုပျခှငျမှာ ရောကျနတေတျတာမြားပါတယျ။ ၀ိုငျယာလကျ ကှနျနကျရှငျးက အလုပျသိပျမဖွဈတော့ အရေးပျေါကရြငျ ဂျေါရခါး လုံခွုံရေးတှေ ဘုံသုံးကွတဲ့ နရောကို သှားပွီး အီးမေးလျ သှားပို့ရတတျတယျ။
၂၀၀၉ ခုနှဈ၊ သွဂုတျလ ၂၈ ရကျနမှေ့ာ ကဘူးလျကိုရောကျတယျ။ ကဘူးလျမှာ နှဈရကျ လောကျနပွေီး၊ ကနျဒါဟာကို ဆကျသှားတယျ။ ကနျဒါဟာမှာ နှဈရကျလောကျ အိပျပွီးတာတောငျ မနကျ မကျြစိနှဈလုံး ပှငျ့တာနဲ့ ပထမဆုံးတှေးမိတာက ငါဘယျမွို့ကို ရောကျနပေါလိမျ့ဆိုတဲ့ အတှေးပဲ။
ကနျဒါဟာကို ကြှနျတျောရောကျပွီး ဒုတိယမွောကျ ညနခေငျးမှာ နီးနီးနားနားက သနေတျသံနှဈခကျြကွားရတယျ။ သိပျမအေးလှတဲ့ စကျတငျဘာလဆနျးပိုငျး တဈညနေ ၈နာရီလောကျမှာပေါ့။ နာရီဝကျလောကျကွာတော့ ကြှနျတော့ မိတျဆှလေညျးဖွဈပွီး ကြှနျတော့ အထကျအရာရှိလညျးဖွဈတဲ့ ကိုအောငျသနျးထှဋျကပွောတယျ။ အခုနက သနေတျသံ နှဈခကျြကွားလိုကျ သလားတဲ့။
အာဖဂနျအရပျသားနှဈယောကျ ကြှနျတျောတို့ အလုပျစခနျးဝငျးနားကို ကပျလာလို့ ရပျခိုငျးတာ မရပျလို့ အစောငျ့တှကေ ပဈလိုကျတာတဲ့။ ပဈရုံပဲ ပဈတာလား၊ ပဈသတျလိုကျတာလား မသခြောပမေယျ့ ပဈတာတော့ သခြောတယျ။
အာဖဂနျနစ်စတနျရဲ့ မွို့ကွီးတှမှော ကငျးလှညျ့နကွေတဲ့ နတေိုးစဈယာဉျတနျးတှကေို ခငျကွောငျးမငျကွောငျးပွဖို့ မာကွောငျးသာကွောငျး စကားသှားပွောဖို့ အနားသှားကပျလို့ မရပါဘူး။ မသင်ျကာရငျ သူတို့ကတော့ ပဈမှာပါပဲ။
အလုပျနားတဲ့ အခြိနျမှာ အခနျးထဲမှာထိုငျပွီး တီဗှီခနျြနယျ တဈခုပွီးတဈခု ပွောငျးကွညျ့တယျ။ စာလေး ဘာလေး ဖတျတယျ။ ကားစီးရ၊ ခရီးသှားရတဲ့ အခြိနျကလှဲရငျ အသကျဘေးနဲ့ ခပျလှမျးလှမျး မှာပဲ နရေတယျလို့ ဆိုရမှာပါ။
ကဘူးလျကိုရောကျတော့ ကြှနျတေျာ့အိတျထဲမှာ နှဈဒျေါလာပဲ ကနျြတော့တယျ။ တကယျတော့ နယူးဒလေီမှာ နှဈရကျနပွေီးတော့ ဟိုတယျခတှေ၊ ဟိုတယျကစီစဉျပေးတဲ့ ကားခတှေ အားလုံးရှငျးအပွီး အငျဒီရာဂန်ဒီလဆေိပျကိုဆငျးလာတော့ အိတျထဲမှာ ၄၂ ဒျေါလာကနျြသေးတယျဗြ။ ဖွဈခငျြတော့ ကြှနျတော့ ပတျဈပို့မှာ ဗီဇာအသဈပမေယျ့လို့ ခွဈရာကလေးပါနတေော့ လဆေိပျက အန်ဒိယ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေး အရာရှိက ပထမအဆငျ့ အနနေဲ့ စတငျ ရဈတယျ။ ဒုတိယအဆငျ့အနနေဲ့ ကြှနျတေျာ့ကို လူတနျးကထှကျစပွေီး စောငျ့ခိုငျးထားတယျ။ တတိယအဆငျ့အနနေဲ့ လူရှငျးသှားတော့မှ ကြှနျတျောနဲ့ စြေးစကားပွောတယျ။ ဒီလယောဉျကို မစီးပဲ နယူးဒလေီမှာ ဆကျနဖေို့ကလညျး ပိုကျဆံ မကနျြတော့ဘူးဆိုတော့ ကြှနျတျောလညျး တျေျာတျောစိတျညဈသှားတယျ။ ဟေ့ . . . ငါ့မှာ ဒျေါလာ ၄၀ ပဲပါတော့တယျလို့ သူ့ကို ရှငျးပွရတယျ။ စြေးတညျ့သှားလို့ လယောဉျပျေါတကျခှငျ့ရတယျ။ ဒီလိုနဲ့ အိတျထဲမှာကနျြတဲ့ နှဈဒျေါလာနဲ့ ကဘူးလျကို ရောကျလာတယျ။
ပွီးတော့ နောကျတဈခါ နှဈရကျလောကျအကွာမှာ ကနျဒါဟာကိုသှားရတော့ ကဘူးလျလဆေိပျမှာ အာဖဂနျရဲသားက ကြှနျတော့အိတျတှကေို ဖှငျ့စဈရငျး မကျြစိတဈဘကျ မှိတျပွပွီး လကျဖွနျ့ပွနလေို့ စိတျပကျြရသေးတယျ။ သကောငျ့သားက အင်ျဂလိပျလိုသာ မပွောတတျတာ၊ ပိုကျဆံကတော့ တောငျးတတျသားပဲ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အလုပျဝငျးနဲ့ တဈမိုငျပြော့ပြော့လောကျပဲဝေးတဲ့ KAF (Kandahar Airfield) ဆိုရငျ သိပျမဝေးလှတဲ့ အနီးကပျအတိတျမှာ တာလီဘနျတှကေ လောငျခြာနဲ့ လှမျးပဈပွီး အားပေး တတျတဲ့ နရောဖွဈပါတယျ။ အခုတောငျမှ လုပျငနျးခှငျက ဆူညံသံကငျးတဲ့ နရောမှာ ထိုငျနားနခေိုကျနဲ့ KAF ကို လောငျခြာနဲ့ပဈတဲ့ အခိုကျဆုံရငျ ထုနျး . . . ထုနျးကနဲ ပဈသံ ခပျသဲ့သဲ့နဲ့ ဥသွဆှဲသံ မသဲမကှဲ ကို ဆကျတိုကျကွားရတတျတယျ။ ပဈတဲ့သူကလညျး အဝေးကနေ ရမျးသမျးမှနျးဆ ပဈရတာဆိုတော့ မြားသောအားဖွငျ့ သူတို့လိုရာ ပဈမှတျကို မထိတာမြားတယျ လို့ဆိုတယျ။ လောငျခြာကပြွီးနောကျ အနညျးအကဉျြး ထိခိုကျသှားတဲ့ သူတှကေို ဆေးခနျးပို့ပွုစု . . . ၊ လောငျခြာကတြဲ့နရောကို ရှငျးလငျး . . . ၊ ပွီးရငျ နိုငျငံခွား စဈသညျတှေ လုပျငနျးကုမဏီတှေကေို စုစညျးနရောခထြားရာ KAF ဟာ ပုံမှနျ လှုပျရှားသှားလာမှုတှနေဲ့ လညျပတျနပွေနျတော့တယျ။
ကြှနျတျောတို့ဆောကျနတေဲ့ အဆောကျအအုံရဲ့ခေါငျမိုးပျေါကနေ ငေးမောကွညျ့ရငျ လူနအေိမျခွတှေတှေရေ့တယျ။ အဲသညျ အိမျခွတှေရေဲ့ ကြောဘကျက တောငျစှယျဘေးက လမျးအတိုငျးဆကျသှားရငျ ကနျဒါဟာမွို့ကိုရောကျပါတယျ။ အဲသညျလှငျပွငျထဲမှာ အိမျလုံးလေးတှေ ကြိုးတိုးကြဲတဲနဲ့ . . . ၊ သဈပငျမရှိ ဘာမရှိနဲ့ . . . ၊ တဈခါတဈလေ အညိုရောငျ သိုးအုပျတှနေဲ့ သိုးကြောငျးသားတှကေို လှမျးမွငျရတယျ။ မိုးကုတျစကျဝိုငျးရဲ့ ဟိုဘကျ သညျဘကျမှာ ခွောကျသယောငျး နတေဲ့ တောငျတနျးတှကေ မားမားရံလို့ . . . ။
ဟိုး အရှယှေ့နျးယှနျးမှာ KAF လို့အတိုကောကျချေါတဲ့ ကနျဒါဟာလယောဉျကှငျး ဧရိယာ ရှိ တယျ။ လယောဉျကှငျးကနေ ထှကျထှကျလာခငျြး လမျးမကွီးရဲ့ ညာဘကျမှာ ဟိုး ဆိုဗီယကျ ကြူးကြျောစဈ ကတညျးက ကနျြရဈခဲ့တဲ့ တငျ့ကားပကျြတှေ၊ ထရပျကားအပကျြတှေ၊ လယောဉျ ရဟတျယာဉျ အပကျြတှေ . . . ။ အခြို့ လယောဉျပကျြတှကေ မွမှော ဖငျစိုကျပွီး ထိပျက ကောငျးကငျကို မြေှျုာလို့ . . . ။ အပကျြအစီးတှကေ ဟိုတဈပုံ သညျတဈပုံ ထိုးထိုးထောငျထောငျနဲ့ . . . ။
ညည အလုပျနားတဲ့အခြိနျမှာ ကောငျးကငျကို မျောကွညျ့ရငျ အနီရောငျ အစကျကလေးတှေ ရှနေ့တောကို တှရေ့တတျတယျ။ အဲဒါပေါ့ဗြ . . . drone ဆိုတာ။ မောငျးသူမဲ့ ကငျးထောကျလယောဉျတှေ။ လထေဲကို ပြံတကျဖို့အတှကျကတြော့ ဒီကပဲ ထိနျးခြုပျပွီး လုပျပေးရတယျ။ လထေဲမှာ ပြံဝဲနပွေီဆိုတာနဲ့ ကယျလီဖိုးနီးယားကလား ဘာလား . . . အမရေိကနျ တဈနရောကနေ ဂွိုလျတုကတဈဆငျ့ ဒီလယောဉျတှကေို ထိနျးခြုပျအလုပျလုပျသှားတယျလို့ ပွောကွတာပဲဗြ လို့ ကိုအောငျသနျးထှဋျက ရှငျးပွတယျ။ တဈခါတလေ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျ တဈဆငျ့စကား တဈဆငျ့နားနဲ့ ပွနျကွားရတဲ့ အာဖဂနျ စဈသတငျးတှကေို ဆှေးနှေးတတျကွတယျ။
အပဈအခတျတှကေိုတော့ တဈခါမှတိုကျရိုကျမကွုံရသေးပါဘူး။ မှတျမှတျရရ ၂၀၀၉ အောကျတိုဘာလ ၂၉ရကျနေ့ ည ၈ နာရီ ၉ နာရီလောကျမှာ တူရကီအငျဂငျြနီယာနဲ့ ကြှနျတျော နှဈယောကျသား punch list အတှကျ စာရငျးကောကျနကွေတုနျး ဒုနျးကနဲ အသံအကယျြကွီး ကွားရပွီး အဆောကျအအုံတဈခုလုံး လှုပျခါသှားတယျ။ ကြှနျတျောတို့ လညျး ပွေးထှကျလာ၊ အခွားသူတှလေညျး အသီးသီး အသကအသက ပွေးထှကျလာကွပွီး စူးစမျးကွတယျ။ အခြို့ကလညျး ဘနျကာဘကျကို ပွေးကွတယျ။ နောကျတော့ တူရကီ အငျဂငျြနီယာက ကြှနျတေျာ့ဆီကို အပွေးပွနျရောကျလာပွီး ရှငျးပွတယျ။ `ဗုံးတော့ ဗုံးပဲ။ ဒါပမေဲ့ ကိစ်စရှငျးသှားပွီလို့ ပွောတယျ။ ဗွိတိသြှတပျတှကေ ဒီအနီးအနားမှာ ဗုံးတဈလုံးတှတေ့ာနဲ့ စနကျတံဖွုတျမရလို့ အကာအကှယျယူပွီး ဖေါကျခှဲလိုကျတာလို့ပွောတယျ´ လို့ ပွနျလာ ပွော တယျ။
မနကျ မနကျကရြငျ မလှမျးမကမျး အာဖဂနျရဲတပျဖှဲ့ လကေ့ငျြ့ရေးသနေတျပဈကှငျးမှာ တဒိုငျးဒိုငျးနဲ့ ပဈနကွေတာကို ကွားရတတျတယျ။ တဈခါတလေ ကငျးလှညျ့လာကွတဲ့ အမရေိကနျ စဈယာဉျ တဈအုပျစု ကြှနျတျောတို့ စခနျးဝငျးထဲကို ဝငျလာနားတာကို တှနေို့ငျတယျ။ အဲသညျ စဈယာဉျတနျးတှဟော မြားသောအားဖွငျ့ KAF လာကွတာပါ။ တိုကျပှဲဝငျယာဉျ (armored vehicle) တှကေနဆေငျးလာပွီး စီးကရကျလေးသောကျလိုကျ ဘဝတူ အမြိုးသားစဈသညျတှနေဲ့ ပြျောပြျောပါးပါး နောကျလိုကျပွောငျလိုကျ လုပျနကွေတဲ့ အမရေိကနျစဈသမီးတှကေို အာဖဂနျ အလုပျသမားတှကေ အထူးအဆနျးသဖှယျ လှမျးငေး ကွညျ့နကွေတာကိုလညျး မွငျနိုငျတယျ။
အာဖဂနျ အလုပျသမားတှေ၊ ဥဇဘကျလူမြိုးနဲ့ ရုရှားလူမြိုး အလုပျသမားတှေ၊ ပါကိစ်စတနျအရာရှိနဲ့ ဖိလဈပိုငျလူမြိုး အရာရှိတို့ ပါဝငျလုပျကိုငျကွတဲ့ ဒီပရောဂကျြကို ကြှနျတျောတို့ မွနျမာအငျဂငျြနီယာ နှဈယောကျက ဦးစီးပါတယျ။ KAF က လောငျခြာသံနဲ့ သနေတျပဈကှငျးက သနေတျသံ တှေ၊ စဈဖိနပျသံ တဖွောငျးဖွောငျးတို့ဟာ ကွာလာတော့ ရိုးသှားပါတယျ။
အစားအသောကျကောငျးကောငျး အလြှံပယျ . . . အသုံးအဆောငျ အထောကျအကူ အပွညျ့အစုံနဲ့ အဝတျလြှျောဖို့ကအစ ပူစရာမလိုပဲ နိုငျငံတကာ အရာရှိတဈယောကျအနနေဲ့ မပူမပငျ မကွေောငျ့မကွနရေပမေယျ့လို့ အငျဂငျြနီယာအလုပျနဲ့ ဆယျစုနှဈ တဈစုလောကျ ကငျးကှာနခေဲ့တဲ့ ကြှနျတေျာ့အပျေါမှာ စိတျဖိစီးမှုက အစဉျရှိနခေဲ့တယျ။
အာဖဂနျရှေးစာဆိုတဈယောကျကတော့ ခွောကျသယောငျးနတေဲ့ တောငျတနျးတှနေဲ့ ဝနျးရံထားတဲ့ ကဘူးလျမွို့တျောဟာ လှပပါဘိတောငျးရယျလို့ ဆိုရှာတယျ။
စိမျးညို့ညို့တောငျတနျးတှနေဲ့ မကျြစိယဉျပါးနတေဲ့ ကြှနျတေျာ့အဖို့ရာ လယောဉျပျေါကနေ ငုံ့ကွညျ့လိုကျရငျ တဈခှငျတဈပွငျလုံး သဲရောငျထနတေဲ့ အောကျမွပွေငျ မွငျကှငျးဟာ လှပတယျလို့ မဆိုသာပါဘူး။ သဈပငျဝါးပငျရယျလို့ ဘာမှမရှိပဲ အမွှောငျးလိုကျ အမွှောငျးလိုကျ တညျရှိနတေဲ့ တောငျတနျး ၀ါညိုညိုတှကေို ခဈြစရာလို့မွငျနိုငျတဲ့ စာဆိုကတော့ ဒီရဒေီမွကေို ခဈြတဲ့စိတျနဲ့ စာဖှဲ့ခဲ့တာဖွဈပါလိမျ့မယျ။
ကဘူးလျကို ပထမဆုံးရောကျလာတဲ့အခေါကျမှာ ကြှနျတေျာ့ကို အာဖဂနျလူမြိုး တဈယောကျ လာကွိုမယျလို့ သိထားတယျ။ ကြှနျတျော လဆေိပျကထှကျလာပွီး ယောငျလညျ လညျနဲ့ ရပျနစေဉျမှာ အာဖဂနျလူမြိုးတဈယောကျက စက်ကူအလိပျတဈလိပျကိုကိုငျပွီး လူတှကေို ကှကျကွညျ့ ကှကျကွညျ့လုပျနတောကို တှရေ့တယျ။ ဒါနဲ့ အဲဒီ ထောငျထောငျ မောငျးမောငျး အာဖဂနျကွီးဟာ ငါ့ကို လာကွိုနတောပဲ ဖွဈရမယျဆိုပွီး သူ့ကို သှားမေးတော့ ပုဂ်ဂိုလျက အင်ျဂလိပျလို နားမလညျဘူး။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတော့ရဲ့ လကျဟနျခွဟေနျကို နားလညျတဲ့ သကောငျ့သားက သူ့လကျထဲက စက်ကူလိပျကို ဖွနျ့ပွတယျ။
အဈဒျပှဲတျော အားလပျရကျအနနေဲ့ ဒုတိယတဈခေါကျ ကဘူးလျကို ရောကျတဲ့အခါ ကမြှ မွနျမာအိမျကို ကြှနျတျောသှားနဖွေဈတယျ။ စကျတငျဘာလ ၁၉ရကျနပေ့ေါ့။ ကဘူးလျလဆေိပျကနေ မွနျမာအိမျကိုလာ၊ ပွီးတော့ အဝတျအစားတှလေဲပွီးတော့ အုနျးနို့ခေါကျဆှဲခကျြမလို့ လုပျနတေုနျး ထိနျးကနဲဆို အသံအကယျြကွီးကွားရပွီး ကြှနျတေျာ့ စိတျအထငျ အဆောကျအအုံတောငျ မသိမသာလှုပျသှားသလို ခံစားရတယျ။ ခဏနတေော့ ဖုနျးဝငျလာတယျ။ အခုနက လဆေိပျကနေ ကြှနျတျောတို့ဖွတျလာတဲ့ လမျးမှာ ဗုံးပေါကျတာ တဲ့။
ကြှနျတျောနဲ့ နောကျအငျဂငျြနီယာတဈယောကျကို သဈလှငျကွိုဆိုပှဲ (fresher welcome) လုပျတဲ့ အနနေဲ့ သောကျပှဲစားပှဲလေးတဈခု မွနျမာအိမျမှာ ကငျြးပတယျ။ အရကျပွငျးမြားမြား သောကျခငျြကွပမေယျ့ ဂြျောနီဝေါ့ကား ရကျလဘေယျတဈလုံးကို မှောငျခိုစြေးနဲ့ ဒျေါလာ၁၅၀ လောကျတောငျး နကွေတော့ ဗျောဒကာနှဈလုံးရယျ၊ အတောမသတျနိုငျ တဲ့ ဟနျနီကနျ ဘီယာဗူးတှနေဲ့ပဲ ကနြေပျလိုကျကွရတယျ။
မွနျမာအိမျမှာ ထမငျးလာခကျြတဲ့ ထမငျးခကျြက နတေို့ငျး ကိုယျပိုငျကားစီးပွီး အလုပျ လာတာဗြ။ ပေါ့သေးသေးမထငျနဲ့။ တိုငျးပွညျရဲ့လူမြားစုက ဆငျးရဲပမေယျ့ တျောရုံတနျရုံ ဝငျငှလေေးရှိရငျ ဟနျးဖုနျးလေးဘာလေး ဝယျနိုငျတယျ။ ကားဝယျနိုငျတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကဘူးလျမွို့ထဲမှာ လူတျောတျောမြားမြား ဟနျးဖုနျးကိုငျနကွေတာကို တှရေ့တယျ။ ကြှနျတော့ဆီမှာ အလုပျလုပျနကွေတဲ့ ပနျးရံ၊ လကျသမားတှလေညျး ဟနျးဖုနျးတှေ ကိုယျစီနဲ့ ပါပဲ။ (ကြှနျတျော အာဖဂနျနစ်စတနျကိုရောကျနတေဲ့ အဲသညျ အခြိနျတုနျးက မွနျမာပွညျမှာ ဟနျးဖုနျး နံပါတျတဈခု ကိုငျရဖို့အတှကျ ဒျေါလာ ၁၅၀၀ တနျဖိုးနဲ့ညီမြှတဲ့ မွနျမာငှပေမာဏကို အနညျးဆုံးအောကျထဈ ပေးဝယျနရေတဲ့ အခြိနျပေါ့။)
အခု အာဖဂနျနစ်စတနျမှာ မွနျမာလူမြိုး အနညျးဆုံး ၁၂ ယောကျလောကျရှိတယျ။ ပရျောဖကျရှငျနယျ အဆငျ့တဈခုခု၊ စီမံခနျ့ခှဲမှု အဆငျ့တဈခုခုနဲ့ အလုပျလာလုပျကွတဲ့ သူတှေ ခညျြးပဲ ဆိုပါတော့ . . . ။ အာဖဂနျနစ်စတနျကို လှနျခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှဈလောကျကတညျးက ရောကျနတေဲ့ ကိုခငျထှနျးက` ဒီကိုရောကျနတေဲ့ မွနျမာတှကေ အဆငျ့လေးဘာလေး တဈခုနဲ့ ရောကျလာကွတာဆိုတော့ မွနျမာဆိုရငျ အထငျတော့ မသေးဘူးဗြ´ လို့ဆိုတယျ။ `ဒါပမေဲ့ ဟိုး ရောကျခါစတုနျးကဆိုရငျ မွနျမာလို့ ပွောလညျး ဘားမားလို့ ပွောပွလညျး ဘာမှနျးမသိကွ တော့၊ ဒါနဲ့ . . . မငျးတို့ ဂပြနျဆိုတာကော သိကွသလား လို့ကြှနျတျောမေးတယျဗြ။ သူတို့က သိတယျလို့ ပွောတော့၊ အေးမှတျထား မွနျမာဆိုတာ ဂပြနျနဲ့ အတူတူပဲလို့။ ဒီလို နားသှငျး ထားလိုကျတာ ကြှနျတျောတို့ကို အထငျတှေ စှတျကွီးနကွေပါလရေော။ ဒါနဲ့ သိပျမကွာဘူး။ နာဂဈမုနျတိုငျး တိုကျတော့ မွနျမာပွညျသတငျးက စီအနျအနျတို့ ဘာတို့မှာ ပွူးတူးပွဲတဲ နှဈဆယျ့လေးနာရီ ပါလာတော့၊ ဒီမှာကွညျ့ ဒီမှကွညျ့ မငျးတို့နိုငျငံမငျးတို့နိုငျငံ ဆိုပွီး လူတကာက လကျညိုးထိုးပွတယျဗြ။ ဒီတော့မှ ဘယျလိုတိုငျးပွညျမြိုးကလာတယျ ဆိုတာ သူတို့ သိသှားတာ´ လို့ပွော ပွရငျး ကိုခငျထှနျးက တဝါးဝါး တဟားဟားရယျပါတယျ။
အဲသညျ အားလပျရကျယူနတေဲ့ ရကျတှအေတောအတှငျး အလုပျကိစ်စနဲ့ ကဘူးလျ ကုမဏီရုံးကိုအသှား လမျးဆုံတဈနေရောမှာ ဘာကွောငျ့ရယျမှနျးမသိ သုံးနာရီယောကျ လမျးပိတျနပေါလရေောဗြာ။ ဓါတျပုံလေးဘာလေး ဆငျးရိုကျမယျဆိုတော့ အားလုံးက ၀ိုငျးတားကွတယျ။ ကားပျေါမှာ ဒီအတိုငျးပဲထိုငျနပေေါ့။ `စာရေးဆရာကွီး၊ ကုနျကွမျးရှာနတောလား။ ခငျဗြားကိုယျတိုငျ ကုနျကွမျးဖွဈသှားမယျ။ အာဖဂနျနစ်စတနျကို ဘာထငျနသေလဲ´ လို့ ဂရုဏာဒေါသောနဲ့ ပွောကွတယျ။
တဈခါတလကေတြော့ အာဖဂနျအမြိုးသမီးတှေ ကားမောငျးနတောကို တှရေ့တတျ တယျ။ တခြို့ လမျးဆုံလမျးခှတှမှော ယာဉျပိတျဆို့မှုဖွဈသှားပွီဆိုရငျ ရှငျးရတာအကွာကွီးပဲ။ ယာဉျထိနျးရဲတှကေ ကားသမားတှကေို ငေါကျငမျးတာလညျးတှရေ့တယျ။ ပွောမရ ဆိုမနိုငျတဲ့ ကားသမားတှရေဲ့ ဘောနကျကို လကျကိုငျတုတျနဲ့ထုတာလညျး လှမျးမွငျရတယျ။ ဒါနဲ့ မိတျဆှေ အငျဂငျြနီယာ ဦးမငျးထှနျးက လှမျးပွောတယျ။
`ဟား . . . ဟား . . . ဟား . . . ။ တဈခါတလေကေတြော့ ကားသမားတှကေ ယာဉျထိနျးရဲကို ဆှဲထိုးသှားတယျဗြ။ ဘယျကားသမားက ဘာကောငျ ဘယျကားသမားက ဆရာကွီးဆိုတာကို သိနိုငျတာမှ မဟုတျတာ။´
ကြှနျတျောတို့ စကားပွောနတေုနျးမှာပဲ စိတျမရှညျနိုငျတဲ့ ကားသမားတဈယောကျက လမျးပွောငျးပွနျတကျမောငျးတယျ။ ပလကျဖောငျးကို ကြျောတယယျ၊ ခှတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရလဒျက တဈဘကျကလာတဲ့ ကားလညျး သှားလို့မရ၊ သူလညျးရှတေို့းလို့မရ ဖွဈကုနျရော။ တဈခါတလေ ဘယျလိုမှရှငျးလို့မရရငျ ယာဉျထိနျးရဲလညျး ဘာမှ မလုပျတော့ပဲ လမျးဘေးမှာ သှားထိုငျနတောကို တှဖေူ့းတယျဗြ။ ကားသမားတှေ ကိုယျ့ဘာသာကိုယျပဲ ရှငျးကွတော့ ဆိုပွီး လကျလြှော့လိုကျတာ။
ဒီနေ့ မကျြစိရှကေ့ ယာဉျပိတျဆို့မှု ဇာတျလမျးက ဘယျလို အဆုံးသတျမလဲတော့မသိ။ ကြှနျတျောတို့ကတော့ ကားကိုဒရိုငျဘာနဲ့ထားခဲ့ပွီး ကြှနျတျောတို့ အာဖဂနျလကျထောကျ တဈယောကျက ခပျလှမျးလှမျးမှာ တားပေးထားတဲ့ တက်ကစီကို တကျစီးပွီး ခရီးဆကျခဲ့ကွတယျ။
ငှေ၊ လကျနကျ၊ အာဏာ
၂၀၀၁ ခုနှဈ စကျတငျဘာလ ၁၁ ရကျနမှေ့ာ အယျလျကဒေါအဖှဲ့က ကမ်ဘာ့ကုနျသှယျမှု အဆောကျအအုံကို လယောဉျနဲ့ ဝငျတိုကျပွီး ဖေါကျခှဲ ဖကျြဆီးပဈလိုကျတယျ။ အဲသညျ ၉/၁၁ အဖွဈအပကျြမတိုငျမီ နှဈရကျအလို စကျတငျဘာလ ၉ရကျနမှေ့ာ အိုစမာဘငျလာဒငျဟာ အယျလျကဒေါ အေးဂငျြ့ နှဈယောကျကို သတငျးထောကျ အယောငျဆောငျခိုငျးပွီး အာဖဂနျနစ်စတနျ မွောကျပိုငျးမဟာမိတျတပျတှရေဲ့ အကွီးအကဲ အာမကျ ရှား မာဆှတျ ကို အသခေံ ဗုံးခှဲ သတျခိုငျးခဲ့တယျ။ အိုစမာရဲ့ လကျရာနှဈခုက တဈခုနဲ့ တဈခု နှဈရကျပဲ အခြိနျကာလ ကှာခွားပါတယျ။ အာဖဂနျနစ်စတနျကို အဲသညျအခြိနျက အုပျစိုးနတေဲ့ တာလီဘနျ အစိုးရက အယျလျကဒေါအဖှဲ့ကို အကာအကှယျပေး၊ အခွခေစြရာနရောပေးထားတဲ့အတှကျ အတုံ့အလှယျသဘောနဲ့ အယျလျကဒေါအဖှဲ့ကလညျး တာလီဘနျတှကေို ဆနျ့ကငျြတိုကျခိုကျ နတေဲ့ မွောကျပိုငျး မဟာမဟာမိတျတပျတှရေဲ့ အကွီးအကဲ မာဆှတျကို လုပျကွံပေးတာဖွဈပါ တယျ။
ဒါပမေဲ့ မာဆှတျခထြားခဲ့တဲ့ အစီအစဉျတှအေတိုငျး တာလီဘနျအစိုးရကို ဖွုတျခနြိုငျခဲ့ တယျ။ မာဆှတျဟာ ယနထေ့ကျတိုငျ ကနျြရဈသူတှကေ လေးစားရတဲ့ အာဖဂနျ အမြိုးသား အာဇာနညျ ဖွဈလာခဲ့တယျ။
`ခေါငျးဆောငျကွီး မာဆှတျ ကဆြုံးသှားတာကို သိရတော့ ကြှနျတျောတို့ အကုနျလုံး ငိုမိကွတယျ´ လို့ အဲသညျတုနျးက မာဆှတျရဲ့ မူဂြာဟဈဒငျတပျမှာ အရာရှိငယျအဆငျ့နဲ့ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့တဲ့၊ အခုအခြိနျမှာ အသကျလေးဆယျရှိပွီဖွဈတဲ့ ကြှနျတေျာ့ လကျထောကျ မစ်စတာ အာမကျဇဟားက ပွနျပွောငျးပွောပွတယျ။
မစ်စတာဇဟားဟာ အခုအခြိနျမှာ ကြှနျတျောအလုပျလုပျနတေဲ့ အမရေိကနျကုမ်ပဏီမှာ ကွီးကွပျရေးမှူး (supervisor) တဈယောကျအနနေဲ့ တာဝနျထမျးဆောငျနတော လေးငါးနှဈ လောကျရှိပါပွီ။ အင်ျဂလိပျစကားကို ကောငျးကောငျး ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြ ပွောတတျတယျ။ အာဖဂနျနစ်စတနျသုံး ဘာသာစကားတှဖွေဈတဲ့ ဒါရီ၊ ပကျဈတို၊ ဖာရစီဘာသာစကားတှကေိုလညျး မိခငျဘာသာစကားအနနေဲ့ ပွောတတျတယျ။ (သူ့အဖကေ ပုရျှထှနျးလူမြိုး၊ သူ့အမကေ တာဂဈြလူမြိုး။) ကုမ်ပဏီဝနျထမျးပမေယျ့လို့ သာမညောငျညမမှတျ လနေဲ့။ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးတှရှေိတဲ့ လူတဈယောကျပါ။
`မဇာရီရှရဈကို လိုငျးဆှဲနတေဲ့ ဘတျဈကားနှဈစီးကို ကြှနျတျောပိုငျပါတယျ။ အဲဒီ ဘတျဈ ကား နှဈျစီးကနေ တဈလဝငျငှေ ဒျေါလာ ၂၀၀၀ ကနေ ၅ဝဝဝကွားရပါတယျ။ ပုံမှနျတော့ မရှိပျဘူး။ ဒီကုမ်ပဏီကနရေတဲ့လစာကတော့ ကြှနျတေျာ့ ကလေး ခွောကျယောကျအတှကျ ကြောငျးစရိတျလေး ဘာလေးရတာပေါ့´ လို့ မစ်စတာဇဟားက ဆိုပါတယျ။ ဇဟားက သူ့ကလေးတှကေို စြေးကွီးတဲ့ ပုဂ်ဂလိကကြောငျးတှမှော ထားတာနျော။
ဘတျဈကားတှတေငျမကပဲ မစ်စတာဇဟားမှာ ကြှနျတေျာ့ကို ပွောမပွတဲ့ လုပျငနျးတှေ ရှိကောငျးရှိနိုငျတယျ။ တဈနိုငျငံလုံး အဝေးပွေးလမျးမတျောတျောမြားမြားကို တာလီဘနျတှကေ စီးနငျးထားလို့ ပို့တောငျဆကျသှယျရေးခကျခဲနတေဲ့ အခုလိုအခြိနျမြိုးမှာ ကုနျစညျပို့ဆောငျရေး လုပျငနျးကိုလညျး မစ်စတာဇဟားလုပျတယျလို့ ပွောတဲ့လူက ပွောကွတယျ။ လမျးတဈလြှောကျမှာ ကွုံရတဲ့ တာလီဘနျတှနေဲ့ စာရငျးရှငျး ခြောဆီထညျ့ပွီး ကုနျစညျကို လိုရာပို့ဆောငျပေးရတဲ့ အလုပျမြိုးပေါ့။
ကြှနျတျော အာဖဂနျနစ်စတနျကိုမရောကျခငျလေးတငျ ပွီးခဲ့တဲ့ သွဂုတျလ ရှေးကောကျပှဲ မတိုငျမီလောကျက မစ်စတာဇဟားဟာ ခှငျ့တဈရကျလောကျပေးပါလို့ ပွောပွီး သုံးလေးပတျ လောကျ ပြောကျသှားခဲ့တယျလို့ အဆိုရှိပါတယျ။ ဟာမဈကာဇိုငျးနဲ့ ဒေါကျတာအဗ်ဗဒူလာတို့ ယှဉျပွိုငျတဲ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ ဒေါကျတာအဗ်ဗဒူလာ ဘကျကနေ ကြေးရှာအရောကျကှငျးဆငျး စညျးရုံးမှုတှေ လုပျနခေဲ့တယျလို့ ဆိုကွတယျ။ ရှေးကောကျပှဲပွီးသှားတော့ ခပျတညျတညျနဲ့ ပွနျရောကျလာတယျ။ တကယျ့လူ . . . ။
မစ်စတာဇဟားတဈယောကျ အခုလောလောလတျလတျမှာ ဘယျသူ့ဘကျတျောသား ဖွဈနတေယျရယျလို့ ကြှနျတျော မသိနိုငျပါဘူး။ အမရေိကနျတှနေဲ့လညျး အလုပျလုပျတယျ။ တာလီဘနျတှနေဲ့ စကားပွောစရာရှိရငျလညျး ဒီလူပွောမှာပဲလို့ သံသယရှိတဲ့လူက ရှိကွတယျ။ ရှေးကောကျပှဲနိုငျငံရေးမှာလညျးပါတယျ။ ပကျရျှထှနျးလူမြိုးပမေယျ့လညျး နိုငျငံမွောကျပိုငျးက တာဂဈြလူမြိုးတဈယောကျ ခေါငျးဆောငျတဲ့ မူဂြာဟဈဒငျလှုပျရှားမှုထဲမှာ ကာလရှညျမြား ပါဝငျ ပတျသကျခဲ့ဖူးတယျ။ လောလောဆယျ သူ့မှာဂှကနြတောတဈခုကတော့ မုတျဆိတျရှညျတာကို မကွိုကျတဲ့လူတှနေဲ့ မုတျဆိတျရှညျထားတာကို တနျဖိုးထားကွတဲ့လူတှကွေားမှာ ဗြာမြားရ တတျတာပါပဲ။
“ကြှနျတော့မုတျဆိတျက အရငျက ဒီထကျရှညျတာပေါ့။ တဈခါက အစညျးအဝေး တဈခုကိုတကျစရာရှိတော့ဗြာ . . . သိပျအဆငျမပွမှော စိုးတာနဲ့ နညျးနညျးတိုအောငျ ညှပျလိုကျရတယျ။” လို့ မစ်စတာဇဟားကဆိုပါတယျ။
အရငျရှေးကောကျပှဲတုနျးက ဟာမဈကာဇိုငျး ဘကျတျောသားဖွဈခဲ့ပွီး အခုရှေးကောကျပှဲ ကတြော့ ဒေါကျတာအဗ်ဗဒူလာဘကျကနေ ဘာလို့ လှုပျရှားရတာလဲလို့ ကြှနျတျောက မေးတော့ “တိုငျးပွညျအတှကျ အပွောငျးအလဲ တဈခုခုမြား ဒေါကျတာအဗ်ဗဒူလာ ဆောငျကွညျးပေးလာနိုငျမလား ဆိုပွီး မြှျောလငျ့လို့ပါ” လို့ သူကဖွတေယျ။
အာဖဂနျနစ်စတနျသမ်မတ ဟာမဈကာဇိုငျးရဲ့ညီ အာမကျကာဇိုငျး တဈယောကျ ဘိနျးလုပျငနျးတှနေဲ့ ပကျသတျနတေယျ၊ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ အမရေိကနျ စီအိုငျအရေဲ့လစာကို စားနတေဲ့သူလညျးဖွဈနတေယျ ဆိုတာကို ကွားရတယျဗြာ၊ အဲဒါကို ခငျဗြား ဘယျလိုယူဆ သလဲ ဆိုတော့ မစ်စတာဇဟားက ဒီလိုဖွတေယျ။ “ခါလီဖာ ကြျောဇောဦး၊ အဲဒီအခကျြ နှဈခကျြက ဖွဈနိုငျခွရှေိရုံသကျသကျမဟုတျဘူး။ ဖွဈကို ဖွဈနတော။ ဟာမဈကာဇိုငျးရဲ့ ညီအဈကိုတှကေ အမရေိကမှာ အမြားကွီးပဲဗြာ။ သူတို့တဈတှေ အမရေိကနျတှနေဲ့ ပတျသကျနတော ကွာလှပွီပဲဗြာ။ ပွီးတော့ ဒီနိုငျငံမှာ ဘိနျးလုပျငနျး ၊ဒါမှမဟုတျ၊ ဘိနျးကလာတဲ့ငှနေဲ့ ကငျးနိုငျတဲ့ သူကလညျး အရှားသားလားဗြာ . . . ” လို့ဆိုတယျ။
ဟာမဈကာဇိုငျးရဲ့ ဒုတိယသမ်မတ အနနေဲ့ ရှေးကောကျခံဖကျဖွဈလာတဲ့ မိုဟာမကျ ဖာဟငျးမျရဲ့ နောကျကွောငျး သတငျးဆိုးတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ မေးသေးတယျ။
“ငှရှေိအောငျ အရငျလုပျရတာပေါ့ဗြာ။ ဘိနျးလုပျငနျးလုပျရငျး ပိုကျဆံမြားမြား ကိုငျလာနိုငျရငျ လကျနကျမြားမြား ဝယျလာနိုငျတယျ။ လကျအောကျငယျသားတှကေို လစာပေးလာနိုငျတယျ။ တဈဆကျတညျးမှာပဲ နိုငျငံရေး သွဇာကွီးလာတယျ။ သူ့ကို ဖယျရှားပဈဖို့ ခကျလာတာပေါ့ . . . ” လို့ဆိုတယျ။
“အခြို့သော အမရေိကနျ စဈဘကျဆိုငျရာ ပဂ်ဂိုလျတှဟော ဘိနျးလုပျငနျးနဲ့ မကငျးဘူး . . . လို့ အဲဒီလုပျငနျးဘကျက ကြှနျတော့ မိတျဆှေ အရပျသားတှကေ ပွောတယျဗြ။ အမရေိကနျတပျသုံး လယောဉျတှကေို ဘာတှသေယျသှားသလဲ ဆိုပွီးတော့ ဘယျသူကမှ စဈဆေးနတောမှမဟုတျတာ။ အဲဒီအမရေိကနျစဈဘကျဆိုငျရာတှကေပဲ သူတို့နိုငျငံကို အလုံးအရငျးနဲ့ ဘိနျးတှတေငျသှငျးနတေယျလို့ ပွောတဲ့လူက ပွောတာပဲဗြ” လို့ မစ်စတာဇဟားက ပွောတော့ ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပရေဲ့လို့ ကြှနျတျောတှေးမိတယျ။
ဒီနရောမှာ မစ်စတာဇဟားအကွောငျးကို ကွားပွီးတဲ့အခါကတြော့ စာဖတျသူတှကေ မစ်စတာဇဟားကို လူရညျလညျ လူရညျတတျတဈယောကျအနနေဲ့ မွငျကောငျးမွငျလာပါလိမျ့ မယျ။ ဒါပမေဲ့ တကယျ့လကျတှဘေ့ဝမှာ မစ်စတာဇဟားဟာ လုပျဖျေါကိုငျဘကျတှကေ အားကိုးအားထားပွုနိုငျတဲ့သူ၊ မိသားစုနဲ့ ဇနီးမယားကို ခဈြခငျတဲ့သူ၊ ပတျဝနျးကငျြက လေးစားခွငျးကို ခံရတဲ့သူတဈယောကျဆိုတာ ကြှနျတျော မငွငျးသာပါဘူး။
အာဖဂနျနစ်စတနျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ စာအုပျတဈအုပျ မွနျမာပွညျကို ရောကျရငျ ရေးကောငျးရေးဖွဈမယျ။ ဒီတော့ လိုလိုမညျမညျ မစ်စတာဇဟားရဲ့ ဓါတျပုံတှေ၊ မိသားစု ဓါတျပုံတှေ ရနိုငျမလားလို့ ကြှနျတျောက မေးတော့ “ရှိတယျဗြ။ ကြှနျတျော ငယျငယျတုနျးက မူဂြာဟဈဒငျတပျသားဘဝတုနျးက ပုံတှေ အခုထကျထိရှိသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဟိုတုနျးကပုံတှေ က ဒဈဂဈြတယျကျောပီ မဟုတျတော့ စကနျဖတျပွီး စီဒီထဲကို ထညျ့ပေးမှရမယျ။ ကဘူးလျကို ခှငျ့ပွနျတဲ့အခါကမြှ ကြှနျတျောလုပျပေးမယျ” လို့ဆိုတယျ။
မူဂြာဟဈဒငျတပျသားလေး ဇဟားဟာ အရှယျကောငျးကောငျး ထကျထကျမွကျမွကျ ဆိုတော့ အရာရှိတှကေ သူ့ကို ကဘူးလျ တက်ကသိုလျကို ပို့ပေးတယျ။ ကဘူးလျတက်ကသိုလျမှာ English Literature အဓိကနဲ့ ဘှဲ့ရတယျ။ ဘှဲ့ရပွနျတော့ မူဂြာဟဈဒငျရဲ့ ဆကျသှယျရေး အရာရှိတဈယောကျအနနေဲ့ အာဂဈြကစ်စတနျ၊ ပါကစ်စတနျ၊ အန်ဒိယနဲ့ ဥရောပကို ခေါကျတုံ့ခေါကျပွနျ သှားရလာရတယျ။ ဌာနကေို ပွနျရောကျတဲ့အခါတိုငျးမှာလညျး တိုကျပှဲတှေ အလီလီ ကွုံရဆုံရတယျ။ ပွီးတော့ . . . အိမျထောငျကြ . . . ၊ အာဖဂနျလူ့အဖှဲ့အစညျးမှာ နရော တဈရောရအောငျ ကွိုးပမျး . . . ။ နိုငျငံရေးမှာ အတကျအကကြွုံရ . . . ။ ဟာမဈကာဇိုငျးအုပျစုနဲ့ အခနျ့မသငျ့တာတှေ ဖွဈပကျြပွနျ . . . ။ ဒေါကျတာအဗဒူလာဘကျကို ပွောငျး . . . ။ ဒါတှဟော ဒီနေ့ မစ်စတာဇဟားဖွဈလာတဲ့ လူတဈယောကျရဲ့ နောကျခံကောကျ ကွောငျးပေါ့။ သူ့ရဲ့ ဘဝကိုယျ၌မှာလညျး “ငှေ၊ လကျနကျ၊ အာဏာ” ဆိုတဲ့ ဓါတျကွီးသုံးပါး စိုးမိုးခယျြလှယျနတောကို တှရေ့တယျ။ ဒါတောငျမှ မစ်စတာဇဟားဟာ အာဖဂနျနစ်စတနျရဲ့ နိုငျငံရေးဇာတျခုံမှာ အသေးအမှား အရံသရုပျဆောငျတဈယောကျပါ။
အရပျသားတှေ လကျနကျကိုငျပွီးလမျးသလားခှငျ့ရှိတဲ့နိုငျငံ၊ ခငျဗြားသာ ပိုကျဆံရှိရငျ လုံခွုံရေးအယောကျတဈရာကို လကျနကျတပျဆငျပွီး ငှားထားဖို့ ဖွဈနိုငျတဲ့နိုငျငံ၊ ခငျဗြားသာ လစာမပေးနိုငျရငျ အဲဒီလုံခွုံရေးဝနျထမျးတှကေ ခငျဗြားကို ကညျြဆနျစာကြှေးသှားမယျ့နိုငျငံ။ အဲသညျ အာဖဂနျနစ်စတနျနိုငျငံမှာ ဘဝအာမခံခကျြနဲ့ဘဝတကျလမျးကို ငှေ၊ လကျနကျ၊ အာဏာ သုံးခုနဲ့ တဖွညျးဖွညျးခငျြး တညျဆောကျလာတဲ့ သူတှကေသာလြှငျ နိုငျငံရေး ဇာတျခုံပျေါကို ရောကျလာကွတာဖွဈတယျ . . . လို့ ဆိုတဲ့လူက ဆိုကွတယျ။
၁၀ ရကျ၊ နိုဝငျဘာလ၊ ၂၀၀၉ ခုနှဈ
ကြှနျတျောတို့ဆောကျနတေဲ့ ပရောဂကျြကို ပငျမကနျထရိုကျပေးတဲ့ ကုမ်ပဏီက လှဲပွောငျးလကျခံယူဖို့ လာရောကျစဈဆေးတယျ။ အတိုအထှာပွုပွငျပေးစရာရှိတာကို ပွုပွငျပေးဖို့ ရှိသေးတာကလှဲရငျ ပရောဂကျြဆောကျလုပျပွီးစီးကွောငျး အတညျပွုလိုကျလို့ လုပျငနျးရဲ့ နောကျဆုံးအဆငျ့ ပွီးစီးသှားတယျ။ ပတျစာခှာ ဖြာသိမျးပွီးလို့ သှားစရာရှိတဲ့ နရောကို ဆကျသှားရနျ ပွငျဆငျဖို့ပဲ ကနျြတော့တယျ။
ကြှနျတျောနဲ့ နှဈရကျသုံးရကျလောကျ မချေါနိုငျမပွောနိုငျဖွဈပွီး တငျးမာနကွေတဲ့ တဈဘကျ ပငျမကနျထရိုကျတာ ကုမ်ပဏီက တူရကီ အငျဂငျြနီယာနဲ့လညျး ခကျြခငျြးပဲ အချေါအပွော ပွနျလုပျနိုငျ . . . အပွုံးမပကျြ စကားပွောနိုငျလာကွတယျ။ နှဈယောကျစလုံးရဲ့ ပုခုံးပျေါက ဝနျထုပျတဈခု လြော့သှားပသေကိုး . . . ။
ဒီနေ့ နလေ့ယျ ထမငျးစားပွီးတော့ ဆိုကျထဲကို ဆငျးလြှောကျကွညျ့တယျ။ ပရောဂကျြအပျလိုကျပွီဆိုပမေယျ့ အတိုအထှာ ပွငျဆငျရနျ (punch list) က ရှိနသေေးတယျ လေ။ ဆေးသုတျသမားတှကေ ဆိုကျတဈခှငျမှာရှိနတေဲ့ manhole (မွအေောကျပေါကျ) အဖုံးတှမှော အမှတျအသားရေးခွယျတဲ့အရောငျတှေ တလှဲ သုတျထားတာကိုတှတေ့ယျ။ မိလ်လာလိုငျးအတှကျ အဝါရောငျ၊ ရပေိုကျလိုငျးအတှကျ အပွာရောငျ၊ လြှပျစဈလိုငျးအတှကျ အနီရောငျဖွဈရမှာ . . . ။ သူတို့သုတျတဲ့ အရောငျတှကေ လှဲနတေယျ။ ဒါနဲ့ ဆေးသုတျသမား နှဈယောကျရယျ စကားပွနျရယျကို လှမျးချေါပွီး ရှငျးပွရတယျ။ လြှပျစဈက ရှော့ချဖွဈလို့ မီးလောငျရငျ မီးရဲ့အရောငျက နီတယျကှာ။ ဒါကွောငျ့ လြှပျစဈလိုငျး မွအေောကျပေါကျရဲ့ အဖုံးမှာ “E” စာလုံးအကွီးကွီးကို အနီရောငျသုတျ။ ရတှေရှေိနတေဲ့ ပငျလယျရဲ့အရောငျက ပွာတယျကှာ။ ဒါကွောငျ့ ရပေိုကျလိုငျး manhole ရဲ့ အဖုံးပျေါမှာ “W” စာလုံးအကွီးကွီးကို အပွာရောငျနဲ့ ရေး။ လူတှရေဲ့ မစငျက ၀ါတယျကှာ။ ဒါကွောငျ့ မိလ်လာလိုငျးရဲ့ manhole အဖုံးမှာ “S” စာလုံးအကွီးကွီးကို အဝါရောငျသုတျ လို့ ရှငျးပွတော့ တဝါးဝါး တဟားဟား ရယျကွတယျ။
အရှယျရောကျသူတှရေဲ့ ၃၀ ရာခိုငျနှုနျးကြျောကြျောလောကျပဲ စာတတျမွောကျကွတဲ့ ဒီနိုငျငံမှာ ကြောငျးဆရာတဈဖွဈလဲ စာရေးဆရာတဈဖွဈလဲ အငျဂငျြနီယာတဈဖွဈလဲ ငါကိုယျတျောခြောဟာ ဒီလိုမြိုး စိတျကူးကောငျးကောငျးနဲ့ ရှငျးပွတတျလတေော့ ငါဟာ အနူတောမှာ လူခြောပါတကား ဆိုပွီး . . . ခါလီဖာ ကြျောဇောဦးတဈယောကျ စိတျကွီးဝငျမိလသေတတျ။
post number – 2
short url to this post => https://bit.ly/2ZjGC9Q
Next Myanmar Times | A caliph in the midst of hell